Nagarik News http://www.nagariknews.com Nagarik News - The Most Comprehensive No. 1 News Portal of Nepal - Breaking News, Latest, Politics, World, Economy, Entertainment, Sports, Technology, Blog, Cartoon, Opinion, Science, Interview, Health, Photo Feature en-US hourly 1 Copyright 2017 Sun, 19 Nov 2017 14:05:44 +0545 तामाकोशी आयोजनाको ८.२ किमी सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न http://www.nagariknews.com/news/30752/ Sun, 19 Nov 2017 13:57:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30752/ स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निमार्ण भइरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सुरुङको ८.२ किलोमिटरको मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। सिभिलतर्फको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
]]> बाजुरामा वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण http://www.nagariknews.com/news/30751/ Sun, 19 Nov 2017 13:51:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30751/ बढीमालिका नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष डम्मर महत माथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट घर फर्किने क्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति नजिकै महतमाथि आक्रमण भएको हो ।
बाजुरा – बढीमालिका नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष डम्मर महत माथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट घर फर्किने क्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति नजिकै महतमाथि आक्रमण भएको हो ।
महत विरामी पुर्याएर राती १० ः ३० बजेतिर घर फर्किदै थिए । महतका अनुसार तीन जनाको समूहले उनीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । कुटपीटबाट महतको आँखा र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका महतले नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताले योजनावद्ध रुपमा आक्रमण गरेको हुनसक्ने बताए । महत एमालेबाट वडा अध्यक्षमा जितेका थिए । २ जनाले अगाडि र एक जनाले पछाडिबाट आक्रमण गरी फरार भएको महतको भनाई छ ।
महतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पत्ता लागे सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्ने घाइते महतले तयारी गरेका छन्।
]]> चीनमा भएको आगलागीमा परी १९को मृत्यु http://www.nagariknews.com/news/30750/ Sun, 19 Nov 2017 13:40:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30750/ चीनको राजधानी बेइजिङबाट दक्षिणतर्फ रहेको दाक्सिनमा अवस्थित एउटा घरमा भएको आगलागीमा परी कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु आठ जना घाइते भएका छन्।
]]> प्रकाश दाहालको निधनमा कसले के भने? http://www.nagariknews.com/news/30749/ Sun, 19 Nov 2017 13:20:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30749/ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्र प्रकाशको निधनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु एवं सर्वसाधारणले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिवंगत अात्मप्रति श्रद्धाञ्जली तथा दाहाल परिवारप्रति समवेदना समेत व्यक्त गरेका छन्। ‘पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरा मित्र पुष्प कमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको निधनको खवरले मर्माहत भएको छुु',देउवाले भनेका छन्।
काठमाडौं— पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्र प्रकाशको निधनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु एवं सर्वसाधारणले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिवंगत अात्मप्रति श्रद्धाञ्जली तथा दाहाल परिवारप्रति समवेदना समेत व्यक्त गरेका छन्।
‘पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरा मित्र पुष्प कमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको निधनको खवरले मर्माहत भएको छुु',देउवाले भनेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रकाशको असामयिक निधनको खबरले मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रकाशलाई असल मानिसको रुपमा स्मरण गर्दै उनको निधनले स्तब्ध भएको जनाएका छन्। 'पूर्व प्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको आकस्मिक निधनको समाचारले स्तब्ध भएको छु। व्यक्तिगतरुपमा उनि असल मानिस थिए। दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु', उनले भनेका छन्, 'प्रचण्डजी,सिताजी र सम्पूर्ण दाहाल परिवारमा यो असह्य पिडा सहनसक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरुन्। हार्दिक समवेदना !'
यसैगरी काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रकाशको अल्पायुमै भएको निधनबाट अाफू मर्माहत भएको जनाएका छन्।
प्रचण्डजीको पुत्र प्रकाश दाहालको अल्पायुमै असामयिक निधन भएकोमा मर्माहत भएको छु। दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।
— Bimalendra Nidhi (@BimalendraNidhi) November 19, 2017
एमाले सचिव योगेश भट्टराई प्रकाशको निधनबाट दाहाल परिवारमा पर्न गएको पीडाप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मृतात्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
काँग्रेस नेता एवं पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अत्यन्त असामयिक पुत्रशोक परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'जीलाई अत्यन्त असामयिक पुत्रशोक परेकामा दु:खी छु। उहाँ र परिवारजनमा सहनशक्तिको कामना गर्दछु।
यसैगरी काँग्रेस नेता गगन थापाले प्रकाशको निधनमा श्रद्धाञ्जली तथा दाहाल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।
सबैखाले मृत्युको रङ एउटै हुन्छ। मृत्युले सृजना गर्ने पीडाको भार उस्तै हुन्छ। निर्मम सत्य नै सही, निमोठिएको होस् या स्वभाविक वियोगको ब्यथा उस्तै हुन्छ। त्यसैले मृत्युमाथि मजाक नगरौं।
— Narayan Amrit (@amritna) November 19, 2017
बाँचुञ्जेल कतिपय मृत्युबाट आफू स्तब्ध हुन्छ
एकदिन आफैँ मरेर कतिपयलाई स्तब्ध बनाउँछ
-मंसिर ३, काठमाण्डू
— Gani Ansari (@GaniAnsarii) November 19, 2017
]]> जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङमा बम फेला http://www.nagariknews.com/news/30748/ Sun, 19 Nov 2017 13:19:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30748/ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङमा सकेट बम फेला परेको छ । बम निर्वाचन कार्यालयको गेटमा झोलामा राखिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक धुव्रराज राउतले जानकारी दिएको छ ।
धादिङ – जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङमा सकेट बम फेला परेको छ।
बम निर्वाचन कार्यालयको गेटमा झोलामा राखिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक धुव्रराज राउतले जानकारी दिएको छ।
बम नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि मतपेटीका गाउँ गाउँका मतदान स्थलमा लैजाने क्रममा सेनाले बम फेला पारेको हो।
निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने घटनालाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ । उत्तरी क्षेत्र र राजमार्ग क्षेत्रमा नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटाइएको छ।
]]> मधुमेह न्यूनिकरणका लागि लायन्स लियोको अभियान http://www.nagariknews.com/news/30747/ Sun, 19 Nov 2017 13:13:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30747/ द इन्टरनेशनल एसोसिएशन अफ लायन्स र लियोले विश्वभरी मधुमेह रोकथामको लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंमा गत एक हप्तादेखि मधुमेह रोकथाम अभियान संचालन भएको थियो।
काठमाडौं– द इन्टरनेशनल एसोसिएशन अफ लायन्स र लियोले विश्वभरी मधुमेह रोकथामको लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंमा गत एक हप्तादेखि मधुमेह रोकथाम अभियान संचालन भएको थियो।
आज यस अभियानको अन्तिम दिन विभिन्न क्लवहरूले मधुमेह रोकथामका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय लायन्स क्लव तथा लियो जिल्ला परिषद् ३२५ बि टुले पनि ललितपुरको मंगलबजार र बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा मधुमेह रोकथामका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ।
कार्यक्रमका संयोजक लायन सञ्जयनाथ जोशीले नेपालमा मधुमेहको (चिनीरोग) रोगी दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि साताव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गरेको बताए । ‘काठमाडौंदेखि नेपालगञ्जसम्मका लियो र लायन्सले मधुमेह रोकथामका लागि विभिन्न कोणबाट कार्यक्रम गरेको छ । मधुमेह विश्वभरीका मान्छेको लागि रोग हो । यस्लाई न्यूनिकरण गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूले खानपानमा ध्यान दिएको पाइँदैन । हामी विस्तारै मधुमेहको दलदलमा फस्दैछौं । यसकारण रोग लाग्न दिनुभन्दा नदिनका लागि प्राथमिकताको साथ अभियान संञ्चाल गरेका थियौं।’
अन्तराष्ट्रिय लायन्स क्लव तथा लियो जिल्ला परिषद ३२५ बि टु का पूर्व गभर्नर डिके ढुंगानाले मधुमेह रोकथामका लागि युवा पुस्ताले अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । ‘विशेषगरी विद्यार्थीहरूलाई मधुमेह रोकथामको संवाहकको रुपमा लिनु पर्छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न क्लव र समुदायसम्म पुगेर यसको विषयमा रचनात्मक तरिकाले बुझाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो भूमिका लियोले प्रभावकारी रुपमा निभाउन सक्छ।’
लियो क्लव अफ हिमालयज पाटनका अध्यक्ष अर्जुन तामाङले मधुमेह न्यूनिकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वयगरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताए । सञ्चार क्षेत्रले यस विषयमा तथ्यपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने भएका कारण लायन्स र लियोले सरकारी निकायसँग समन्वय गरे थप प्रभावकारी हुने तामाङको भनाई थियो ।
]]> रोबोर्टले सेवा दिने रेस्टुरेन्ट http://www.nagariknews.com/news/30745/ Sun, 19 Nov 2017 12:48:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30745/ नेपालमा पहिलोपटक रोबोटले सेवा दिने रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउने भएको छ । काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित पिपुल्स प्लाजामा खोलिएको सो रेस्टुरेन्टमा ग्राहकको अर्डरअनुसार रोबोटले खानाका परिकार पस्किने छ।
काठमाडौं – नेपालमा पहिलोपटक रोबोटले सेवा दिने रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउने भएको छ । काठमाडौंको खिचापोखरीस्थित पिपुल्स प्लाजामा खोलिएको सो रेस्टुरेन्टमा ग्राहकको अर्डरअनुसार रोबोटले खानाका परिकार पस्किने छ।
सो रेस्टुरेन्ट विगत एक दशकदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अनुभव बटुलेको रञ्जित साहले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रेस्टुरेन्टमा फास्ट फुड कुजिन अन्तर्गत क्रिस्पी फ्राइड चिकेन, ग्रिल्ड चिकेन, बर्गर र हटडगलगायत परिकार पस्किने लक्ष्य राखेको सञ्चालक साहले बताए । करिब दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा तीनजना दाजुभाइको संयुक्त प्रयासमा सो रेस्टुरेन्ट सुरु हुन लागेको हो।
‘विश्वका अन्य मुुलुक जस्तै यस्तो प्रविधिबाट रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसाय पहिलादेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा हामीले ग्राहकलाई छिटो र छरितो सेवा दिने उद्देश्यले यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका हौं,’ सञ्चालक साहले भने । सो रेस्टुरेन्टको औपचारिक उद्घाटन भने मंसिर ८ गते हुने साहले जानकारी दिए।
]]> 'प्रकाश दाहालको मृत्यु राति ३ बजे नै' http://www.nagariknews.com/news/30746/ Sun, 19 Nov 2017 12:38:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30746/ प्रकाश दाहालको निधन राति ३ बजे नै भएको नर्भिकका चिकित्सकहरुले बताएका छन्। अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उनको मृत्यु अस्पताल ल्याउन ३ घन्टाअघि मृत्यु भएको जानकारी दिइयो। दाहाललाई बिहान ५:५० बजे नर्भिक पुर्‍याइएको थियो।
]]> पाँच दिनमा एक खर्ब १४ अर्ब डलरको जहाज अर्डर http://www.nagariknews.com/news/30744/ Sun, 19 Nov 2017 12:36:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30744/ युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा पाँच दिनसम्म चलेको १५औं ‘दुबई एयर सो’ मा करिब एक खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको जहाज खरिद अर्डर भएको छ । उड्डयन क्षेत्रमा यो नयाँ कीर्तिमान भएको आयोजकले दाबी गरेका छन्।
दुबई– युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा पाँच दिनसम्म चलेको १५औं ‘दुबई एयर सो’ मा करिब एक खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको जहाज खरिद अर्डर भएको छ । उड्डयन क्षेत्रमा यो नयाँ कीर्तिमान भएको आयोजकले दाबी गरेका छन्।
प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा आयोजना हुँदै आएको दुबई एयर सो आयोजकका अनुसार सन् २०१५ को दाँजोमा यसपालि कारोबारसँगै दर्शक पनि २० प्रतिशतले बढेर ७९ हजार तीन सय ८० जना पुगेका छन्।
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले पाँच दिनसम्ममा ६२ अर्ब ५० करोड डलरमा पाँच सय ३५ थान जहाज जहाज बेच्न विभिन्न वायुसेवासँग सम्झौता गरेको छ । यसमा एयरबसको प्रतिस्पर्धी अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ थोरै परिमाणले पछाडि परेको छ । बोइङले भने पाँच दिनभित्र विभिन्न कम्पनीलाई ५० अर्ब डलरमा दुई सय ९६ थान जहाज बेच्ने सम्झौता गरेको छ।
एयरबसले भारतको सस्तोमा उडान गर्ने बजेट एयरलाइन्स इन्डिगोसँग ४९ अर्ब ५० करोड डलरबराबरको जहाज खरिद अर्डर सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार एयरबसले इन्डिगोलाई ‘ए३२० निओ’ सिरिजका चार सय ३० थान जहाज आपूर्ति गर्ने छ । यी ‘न्यारो बडी’ जहाज हुन्।
त्यसैगरी बोइङले पनि एयर सोको अन्तिम दिनसम्ममा दुबईको बजेट एयरलाइन्स फ्लाई दुबईसँग २७ अर्ब डलरबराबरको जहाज खरिद सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बोइङले फ्लाई दुबईलाई ‘बि७३७ म्याक्स’ सिरिजका दुई सय २५ थान जहाज आपूर्ति गर्ने छ । यी ‘न्यारो बडी’ जहाज हुन्।
‘कूल कारोबार र दर्शक संख्याले आफैं बोल्छ, यो वर्ष पनि दुबई एयर सो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,’ दुबई एयर सोको आयोजक टार्सस एफ एन्ड ई मिडिल इस्टका प्रबन्ध निर्देशक मिचेल भान एकेलिजेनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबमा दुबई विश्व उड्डयनको केन्द्रविन्दुमा पर्छ र दुबई एयर सोमा सधैं अविश्वसनिय र अतुलनिय सम्झौता तथा नवीन र नौला विचार देख्दै आएका छौं।’
आयोजकका अनुसार कुबेतको एक वायुसेवा कम्पनी वातानिया एयरवेजले एयरबससँग ए३२० निओ सिरिजका २५ जहाज भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी मध्यपूर्वको सस्तोमा उडान गर्ने बजेट एयरलाइन्स एयर अरेबियाले पनि एयरबससँग ‘ए३२१ निओ’ सिरिजका ६ थान जहाज भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै एयरक्याप र इजिप्ट एयरले पनि ए३२० निओ सिरिजका १५ थान जहाज भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ।
‘बोइङ कम्पनीका लागि दुबई एयर सो असाध्यै लाभदायी र सफल भएको छ । हाम्रा क्षेत्रीय ग्राहक (वायुसेवा कम्पनी, लिजिङ कम्पनीलगायत) ले हाम्रा उत्पादन र प्रविधिप्रति कायम राखेको विश्वाससँगै मध्यपूर्वमा हाम्रो साझेदारी पनि निरन्तर बढिरहेको छ,’ बोइङको मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका र टर्की हेर्ने अध्यक्ष बर्नार्ड डनले भने, ‘हामीले प्रमुख वायुसेवा कम्पनी इमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाई दुबई, अजरबैजान एयरलाइन्स, एलाफ्को र इथियोपियन एयरलाइन्सँग जहाज खरिद सम्झौता गरेका छौं ।’
दुबई एयर सोको १६औं संस्करण सन् २०१९ मा हुने छ । युएईको इमिरेट्स एयरलाइनले १६ अर्ब डलरमा ‘बि७८७–१०’ सिरिजका ४० थान जहाज खरिद सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताअनुसार पहिलो जहाज सन् २०२२ मा आपूर्ति हुने छ । इमिरेट्स एयरबसको सबैभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने ‘ए३८०’ र बोइङको सबैभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने ‘बि७७७’ सिरिजका जहाज धेरै सञ्चालन गर्ने संसारकै एकमात्र वायुसेवा कम्पनी हो ।
]]> करदाता मैत्री प्रशासनको माग http://www.nagariknews.com/news/30743/ Sun, 19 Nov 2017 12:33:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30743/ निजी क्षेत्रका व्यवसायीले करदाता मैत्री कर प्रशासन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मानित रुपमा हेर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
काठमाडौं – निजी क्षेत्रका व्यवसायीले करदाता मैत्री कर प्रशासन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मानित रुपमा हेर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले छैठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । व्यवसायीले निजी क्षेत्रले कर तिर्ने दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करदाता कर कार्यालयमा जाँदा सुरक्षित ठाउँमा आएका छौं भन्ने अनुभूति दिलाउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘कर कार्यालयमा जाँदा असहज भएको सबैको गुनासो छ,’ शर्माले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर नविनतम प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ।’
अहिले पनि मुलुकमा कर तिर्ने उद्यमीलाई सम्मान नभएको उनले बताए । ‘सरकारका विभिन्न निकायमा पुग्दा समस्या भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना कानुन संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्छ ।’ राज्यले आफैं व्यवसाय गरेर मुलुकको समृृद्धि सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले परम्परागत कर प्रशासन सुधार भएपनि अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भएको बताए । ‘निजी क्षेत्र कर तिर्न उत्साहित छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भए । सहजीकरण गर्ने निकाय नहुँदा व्यवसायीलाई झन्झट भएको बताए । ‘कर छल्नेलाई महासंघले सहयोग गर्दैन,’ उनले भने, ‘राजस्व न्यायाधीकरणमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको छ।’
उनले व्यवसायी मुद्दा मामिलामा जान नचाहे पनि राजस्व न्यायाधीकरणमा जानु परे ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था गलत भएको टिप्पणी गरे । गोल्छाले स्थायी प्रकृत्तिको कर निरुपण गर्ने निकाय आवश्यक भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दोहोरो करको सम्भावना रहेको बताउँदै यसले निजी क्षेत्र सशंकित भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले निजी क्षेत्रले कर तिर्ने दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘कर प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ,’ तुलाधरले भने, ‘देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानका लागि सहकार्य जरुरी छ।’
‘हामी नाफाखोर मात्र हो,’ तुलाधरले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अनुगमनको नाममा व्यापारीलाई कारोबारी मुद्दामा थुन्ने काम भएको छ ।’ यस्ता गतिविधिले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए।
सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तर्फबाट सुर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रबि केसीले सरल र पारदर्शी कर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि करदाता मुद्दा मामिलामा जान चाहँदैनन्,’ केसीले भने, ‘कानुनी रुपमा रहेका जटिलता हटाउनु पर्छ ।’ कानुनमा भएका दुविधा हटाउनु पर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले कर प्रशासनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताए । ‘करदाता र कर प्रशासनबीच भएको दूरी हटाउन प्रयत्नशील छौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘राजस्व संलकनको संरचनागत परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले विद्युतीय भुक्तानीलाई अघि बढाउन पहल गरिरहेको बताए । ‘सेन्टर विलिङ मनिटरिङ सिस्टम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो पद्धतिमा सबै ठूला करदाता आउनुपर्छ ।’ राजस्व असुली उत्साहप्रदक भएको उनले बताए । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लागि परेको उनको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सफल राज्य सञ्चालनका लागि करदाताको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सवल बनाउने सबैको दायित्व हो,’ ढुंगानाले भने, ‘करदातालाई दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन तत्पर छौं ।’ विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विभाग तत्पर रहेको ढुंगानाले बताए । कर क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताए । ‘सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्र पनि शक्तिशाली छ,’ रेग्मीले भने, ‘दुवै क्षेत्र सँगसँगै काम गर्नुपर्छ ।’ रेग्मीले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच बोर्डरलेस पोलिसीमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘देश कति सार्वभौम छ भन्ने त्यो देशको अर्थतन्त्रले पनि निर्धारण गर्छ,’ उनले भने।
केन्द्रीय बिजक प्रणाली सुरु
आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणाली सुरु गरेको छ । कर लिने पद्धतिलाई पारदर्शी बनाउनका लागि शुक्रबारदेखि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
छैठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यो प्रणालीको सुरुआत गरेका हुन् । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले केन्द्रीय बिजक प्रणालीमा कारोबार गर्ने पहिलो कम्पनी भएको छ । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने सबै कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय तहमा बसेर अनुगमन गर्न सक्छ भने व्यवसायीले हरेक विवरण यसमा नै इन्ट्री गरेर कारोबार गर्छन् । यो प्रणालीको सबै कारोबारको सफ्वयर विभागबाटै निरीक्षण हुने भएकाले पारदर्शी हुन्छ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सबै ठूला करदातालाई केन्द्रीय बिजक प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न आग्रह गरे । ‘यो वर्ष ५० प्रतिशत ठूला करदाता सेन्ट्रल बिलिङ सिस्टममा आउन आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले कर प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउँछ ।’
]]> प्रकाशको अन्तिम संस्कार ४ बजे पशुपति आर्यघाटमा गरिने http://www.nagariknews.com/news/30742/ Sun, 19 Nov 2017 12:29:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30742/ प्रकाश दाहालको अन्तिम संस्कार आजै गरिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषालले आजै ४ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने जानकारी दिइन्।
काठमाडौं- प्रकाश दाहालको अन्तिम संस्कार आजै गरिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषालले आजै ४ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने जानकारी दिइन्।
त्यसअघि दाहालको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालयमा राखिनेछ। भुषालका अनुसार दिउँसो १ बजेबाट पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा राखिनेछ।
अहिले पुष्पकमल दाहालसहित परिवारका सदस्यहरु र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नर्भिक अस्पताल पुगेका छन्।
]]> सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र तयार http://www.nagariknews.com/news/30741/ Sun, 19 Nov 2017 12:26:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30741/ मेलाम्चीको पानी राख्न बन्न लागेको सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएको छ। २०७० पुसबाट निर्माण सुरु भएको उक्त केन्द्रको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भएको जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले जानकारी दिएको छ । जाइकाद्वारा प्रदान गरिएको करिब पाँच अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । जाइकाबाट प्राप्त सहयोग केन्द्र निर्माण र त्यससँग सम्बन्धित परामर्श सेवाका लागि खर्च गरिएको थियो । प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक आठ करोड ५० लाख लिटर बराबरको पानी प्रशोधन गर्न सकिने जाइकाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी परियोजनाअन्तर्गत सुरुङबाट ल्याइने पानी उक्त प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिनेछ । परियोजनाको सुरुङ निर्माण तथा अन्य काम सम्पन्न भएपछि प्रशोधन केन्द्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ।
]]> दूधकोसी पुल निर्माण अन्तिम चरणमा http://www.nagariknews.com/news/30740/ Sun, 19 Nov 2017 12:24:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30740/ निर्माण सुरु भएको आठ वर्षपछि खोटाङ जोड्ने पहिलो मोटरेल पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौता म्याद नाघेको पाँच वर्षपछि खोटाङ र ओखलढुंगाको जयरामघाटस्थित दुधकोसी पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
]]> विद्यालय बन्द गरेर चुनाबमा लागेका शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन निर्देशन http://www.nagariknews.com/news/30739/ Sun, 19 Nov 2017 12:18:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30739/ विद्यालय बन्द गरेर प्रधानाध्यापक र शिक्षक निर्वाचन प्रचानरप्रसारमा लागेपछि रसुवामा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर लागेपछि पठनपठन प्रभावित बनेको हो।
रसुवा— विद्यालय बन्द गरेर प्रधानाध्यापक र शिक्षक निर्वाचन प्रचानरप्रसारमा लागेपछि रसुवामा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर लागेपछि पठनपठन प्रभावित बनेको हो।
जिल्लामा रहेका लोकतान्त्रिक गठबन्धन र बाम गठबन्धनको शिक्षक संगठनमा आबद्ध शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर चुनावी अभियानलाई तिब्रता दिन थालेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रसुवाले कार्वाहीको चेतावनी दिएको छ।
नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विद्यालयमा पढाउन गएका शिक्षकले राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँडन मिल्दैन, पहिलो चोटी चेतावनी दिएका छौ, सो कार्य फेरि दोहोरिएमा कानुन वमोजिम कार्वाही गर्छौं।'
द्यालय बन्द गरेर पार्टीको जुलुस र आमसभामा लागेको गुनासो आएपछि कार्यालयले ८ बुँदे सूचना जारी गरी तत्कालमा विद्यालयमा फर्कन निर्देशन दिएको बताइएको छ। निर्वाचन आउन ८ दिन बाँकी रहेको र शिक्षा विभागले विद्यालय विदाको बारेमा निर्णय गरि नसकेकाले कार्यालयको अनुमतिबिना विद्यालय बन्द नगर्नका लागि आग्रग गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले बताए।
उनले भने, ‘विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले कुनै सूचना पठाएको छैन्, विभागले सूचना जारी गरेपछि हामी विद्यालय र शिक्षकलाई खबर गर्छौं।’ कार्यालयलाई जानकारी नगराई विद्यालय बन्द गर्ने प्रधानाध्यापकलाई पहिलो चरणमा चेतावनी दिएको उनले बताए।
‘शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नै चुनावी अभियानमा लागेपछि तत्काल अभियान रोकेर विद्यालयमा फर्कनका लागि पहिलो पटक आग्रह गरिएको छ, उनले भने। मतदान केन्द्र रहेको विद्यालय ४ दिन विदा दिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बेला जिल्लाका विद्यालय भने एक साता अगाडीदेखि नै बन्द हुन थालेपछि कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विद्यालयमा पढाउन गएका शिक्षकले राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँडन मिल्दैन, पहिलो चोटी चेतावनी दिएका छौ, सो कार्य फेरि दोहोरिएमा कानुन वमोजिम कार्वाही गर्छौ ।
विद्यालयमा गएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी दिन नमिल्ने भएकाले मतदाता शिक्षा लगायतको लागि विद्यालयको प्रयोग निषेध गरिएको उनको भनाइ छ। गठबन्धनले विद्यालयमा गएर मतदाता शिक्षा दिएको सम्बन्धमा उनले भने ‘राजनीतिक दलले मतदाता शिक्षाको नाममा पाठ पढाएछन् , निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताले पनि विद्यार्थीलाई सिकाउन मिल्दैन् यसका लागि हामीले सूचना जारी गरेका छौँ।’
विद्यालय बन्द भएको जनगुनासो आएको भएपनि के कति सङ्ख्यामा बन्द भएको भन्ने बारेमा जानकारी नआएको कार्यालयले जनाएको छ।
]]> दलहरुद्वारा चितवनमा चुनाबी कार्यक्रम स्थगित http://www.nagariknews.com/news/30738/ Sun, 19 Nov 2017 12:13:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30738/ चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुत्र शोकमा परेपछि चितवनका दलहरुले चुनाबी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका छन्।
चितवन— चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुत्र शोकमा परेपछि चितवनका दलहरुले चुनाबी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका छन्।
बाम गठबन्धनका साथै चितवन क्षेत्र नं. ३ मा अन्य प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारहरुले पनि अजलाई चुनाबी कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएका छन्।
बाम गठबन्धनबाट गठित चुनाबी परिचालन समितिका उपसंयोजक सूर्य सुवेदी पथिकले क्षेत्र नं. ३ का सवै चुनाबी कार्यक्रमहरु स्थागित भएको जानकारी दिए । चितवन क्षेत्र नं. २ का बाम गठबन्धन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक घनश्याम भट्टराईले पनि दुई नम्बर क्षेत्रका सवै औपचारिक कार्यक्रमका साथै मंसिर ५ मा भरतपुरमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने गरेर आयोजना भएको आमसभा पनि स्थगित भएको बताए।
बाम गठबन्धनबाट मात्रै नभएर दाहालका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विक्रम पाण्डेले पनि आज चितवन क्षेत्र नं. ३ मा हुने आफ्ना कार्यक्रमहरु स्थगित भएको बताएका छन्।
सो क्षेत्रका विवेकशिल साझाका उम्मेदवार शरदराज पाठकले पनि आफ्ना चुनाबी कार्यक्रमहरु स्थगित भएको जानकारी सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत गराएका छन्।
]]> माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नर्भिक पुगे http://www.nagariknews.com/news/30737/ Sun, 19 Nov 2017 12:03:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30737/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नर्भिक अस्पताल पुगेका छन्। चुनावी सभाको सम्बोधन गर्न झापा पुगेका दाहाल छोरा प्रकाश दाहालको निधनको खबरसँगै काठमाडौं फर्किएका हुन्। उनी हेलिकोपटरबाट काठमाडौं फर्किएका हुन्।
]]> बिबीलाई जहाज बेच्ने/नबेच्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट http://www.nagariknews.com/news/30736/ Sun, 19 Nov 2017 11:37:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30736/ नेपाल वायुसेवा निगमले सञ्चालनमा नरहेको निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी बिबी एयरवेजलाई आफ्नो ३० वर्ष पुरानो जहाज बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने निर्णय आगामी सञ्चालक समिति बैठकमार्फत गर्ने भएको छ। बिबी एयरवेजले एकथान ठूलो बोइङ जहाज खरिद गर्न डेढ करोड रुपैयाँ दिएर ‘सम्पर्कबिहीन’ भएपछि निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्न लागेको हो।
काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमले सञ्चालनमा नरहेको निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी बिबी एयरवेजलाई आफ्नो ३० वर्ष पुरानो जहाज बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने निर्णय आगामी सञ्चालक समिति बैठकमार्फत गर्ने भएको छ।
बिबी एयरवेजले एकथान ठूलो बोइङ जहाज खरिद गर्न डेढ करोड रुपैयाँ दिएर ‘सम्पर्कबिहीन’ भएपछि निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्न लागेको हो।
बिबीले डेढ वर्षदेखि ‘ग्राउन्डेड’ निगमको एकथान ठूलो बोइङ जहाज गत असोज अन्तिम साता खरिद गरेको थियो । निगम सञ्चालक समितिले बिबीलाई उक्त जहाज बेच्न अनुमति दिएपछि व्यवस्थापनले बिबीसँग जहाजको कूल मूल्यको १० प्रतिशत रकमवापत १ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लिएको थियो।
‘रकम प्राप्त भएको एक साताभित्र जहाज खरिद सम्झौता गर्ने समझदारी थियो,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर, त्यसपछि बिबी एयरवेजका सम्बद्ध अधिकारी कोही पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन् । अब यो जहाज न हामीले अन्य कम्पनीलई बेच्न पायौं न मर्मत गर्न नै पायौं । यही कारण हामी अन्योलमा छौं ।’
बिबी एयरवेज गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी भवन भट्टको टिबिआई ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो । भट्ट गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघका नवनियुक्त अध्यक्ष हुन्।
बिबीका अध्यक्ष भट्ट, प्रबन्ध निर्देशक शिशिर भट्टलगायत उच्च अधिकारी जति ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमै नआएपछि निगम व्यवस्थापनले बाध्य भएर सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान लागेको हो । बिबीका महाप्रबन्धक अनिमेष मिश्रसँग एक महिनाअघि कुराकानी हुँदा ‘हामी आउँछौं’ भने पनि त्यसयता उनीहरू सम्पर्कमा नआएको निगमको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूलाई चिठी, इमेल, ल्यान्डलाइन टेलिफोन, मोबाइल फोनबाट पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि वास्ता गर्नुभएन,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा बिबीलाई जहाज बेच्ने कि नबेच्ने, उसको पैसा फिर्ता दिने कि नदिने भन्ने प्रस्ताव पेस गर्छौं र उपयुक्त निर्णय गर्छौं ।’
यता बिबीका अधिकारीले भने निगमको जहाज आफूहरूले नै खरिद गर्ने बताएका छन् । ‘निगमको बोइङ जहाज हामी नै खरिद गर्छौं,’ बिबीका प्रबन्ध निर्देशक शिशिर भट्टले नागरिकसँग भने, ‘खरिद नगर्ने भए डेढ करोड रुपैयाँ किन बुझाउँथ्यौं ?’
भट्टले आफूहरू सम्पर्कमै रहेको दाबी गरे । निगमले भन्नासाथ उपस्थित हुने पनि उनले बताए । ‘निगमलाई बाँकी रकमको चुक्ता योजना दिन भनेका थियौं, तर अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी होइन उनीहरू नै सम्पर्कमा छैनन् । यसअघि एनआरएनएको चुनावले केही व्यस्त भएका थियौं, त्यत्ति हो ।’ बिबीले थप मर्मतपछि निगमको जहाजबाट भारतको नयाँदिल्ली उडाउने तयारी गरेको छ।
बिबीले कम्बोडियाको टोन्ले साप एयरलाइन्ससँग एकथान ‘बोइङ ७५७–२००’ सिरिजको जहाज भाडामा लिई २०६९ भदौ २८ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको थियो तर, सञ्चालनको तीन महिनामै सबै उडान बन्द गरेको थियो । पाँच वर्षपछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने उद्देश्य लिएर बिबीले वायुसेवा निगमको जहाज तीन दशक पुरानो भए पनि खरिद गर्न १० प्रतिशत रकम बुझाएको थियो।
बिबीले १४ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (१५ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ) मा जहाज खरिद गरेको हो । यसको १० प्रतिशतवापत हुन आउने १ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिबीले निगमको खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।
निगमले बेच्न खोजेको ‘बि७५७–२००’ सिरिजको उक्त जहाज करिब डेढ वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छ । ‘९एन–एसिए’ कलसाइन भएको १ सय ९० सिट क्षमतायुक्त यो जहाज निगमले सन् १९८७ मा अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङसँग खरिद गरेको थियो । यसको नाम ‘कर्णाली’ हो । यो जहाज बेच्न निगमले दुईपल्ट ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो।
निगमका अनुसार उक्त जहाज जे जस्तो अवस्थामा छ त्यहीअनुसार बिक्री गरिएको हो । जहाजमा ‘आरबी२११–५३५इ४’ मोडेलका दुईथान इन्जिन छन् । तीमध्ये एउटा इन्जिनको आयु शून्य छ भने अर्कोको आयु जम्मा १ सय घन्टामात्र छ । जहाज खरिद गर्ने कम्पनीले उडाएर लैजान त्यति अवधि राखिएको हो।
निगमले बोइङ एसिए जहाज पुरानो भएको र मर्मत खर्च अत्यधिक लाग्ने भएपछि बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको दुईथान इन्जिन मर्मत गर्नमात्र करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएपछि ‘बनाउनभन्दा बेच्न फाइदा’ भन्दै निगम जहाज बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो।
निगमसँग रहेको यस्तै अर्को एउटा जहाज भने उडानमा प्रयोग भइरहेको छ । निगमका दुईथान बोइङले उडान गरिरहँदा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्थे । तर, ती जहाजले जति आम्दानी गर्थे, त्यसको अधिकांश हिस्सा मर्मतमै खर्च हुने गरेको थियो।
त्यसबाहेक बि७५७ जहाज उडाउँदा प्रतिउडान जति आम्दानी हुने गर्छ, त्यसको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा इन्धनमा खर्च हुने गरेको थियो । अहिले निगमसँग रहेका एयरबस कम्पनीमा निर्मित नयाँ जहाजले भने यसको आधामात्र इन्धन खपत गर्ने गर्छन् । पुरानो हुँदै जानु र मर्मत खर्च उच्च हुँदै गएपछि निगमसँग बिक्रीको विकल्प थिएन।
तीन दशक पुरानो उक्त जहाज ६ महिनादेखि लिलाम बढाबढमा बेच्न गरेको प्रयास असफल भएपछि निगम सञ्चालक समितिले जहाजको भाउ १७ लाख १० हजार डलरबाट २ लाख १० हजार घटाएर १५ लाख डलरमा बिक्री गर्न व्यवस्थापनलाई अनुमति दिएको थियो।
पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा एउटा पनि आवेदन परेको थिएन । दोस्रो पटक भने अमेरिकाको एभियन सिस्टम्स इन्कर्पोरेटेड र इजरायलको एपिएस एयरपार्ट्स, सर्भिसेस एन्ड सप्लाइज लिमिटेड तथा नेपालका हिमालया एभिएसन कन्सल्ट्यान्ट तीलगंगा, टिबिआई ग्रुप नेपाल गैरीधारा, जनार्दनमान डंगोल सानेपा, बिबी एयरवेज नागपोखरी र अनु मानन्धर नयाँबानेश्वरले बि७५७ जहाज खरिद गर्न आवेदन हालेका थिए।
तीमध्ये एभियनले १० लाख डलर, टिबिआई ग्रुपले १२ लाख ५० हजार डलर र हिमालया एभिएसनले १३ लाख डलरमा जहाज किन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बाँकी चारजनाले भने मूल्य प्रस्ताव गरेका थिएनन्।
]]> विकास खर्च महिनाको डेढ प्रतिशत http://www.nagariknews.com/news/30734/ Sun, 19 Nov 2017 11:32:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30734/ चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई पैसा दिएकाले पुँजीगत बजेट खर्च हुने सरकारले अनुमान गरे पनि तथ्यांकले प्रतिमहिना डेढ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको देखाएको छ।
]]> ‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’ http://www.nagariknews.com/news/30733/ Sun, 19 Nov 2017 11:25:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30733/ नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ । थप, नेपाली फिल्ममा महिलाको चरित्र चित्रण ‘पितृसत्तात्मक’ सोचभन्दा पर जान सकेको छैन । नेपाली फिल्मको कुरा गर्दा बारम्बार सुनिदै आएका आलोचना शनिबार ‘मिररिङ दि वुमन्स रोल इन फिल्म इन्डस्ट्री’ शीर्षकमा भएको बहसमा महिला फिल्मकर्मीले पनि दोहो¥याए । समूहगत छलफलमा सहभागी सबै महिलाकर्मीको निष्कर्ष थियो, ‘ नेपाली फिल्ममा नारी चरित्रको चित्रण पुरुषवादको माखेसाङलोमा छ तर त्यो साङलो तोड्न सजिलो छैन ।’
]]> धनगढी तताए हेमन्तले http://www.nagariknews.com/news/30732/ Sun, 19 Nov 2017 11:20:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30732/ डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा उनले गीत, गजल र कविता सुनाएर माहौल तताए।
धनगढी–डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा उनले गीत, गजल र कविता सुनाएर माहौल तताए।
साहित्यिक सृजनामा सधैं सिमान्तकृतहरुको आवाज मुखरित गर्दै आएका विवशले भगवानको खोजी शिर्षक कविताबाट वाचन शुभारम्भ गरे । उनले हली, बा दमाहा र ढोलक, देशको खोजी, कतारको रैबार, भुकम्प, कौशी र बाबा जस्ता मर्मस्पर्शी कविता सुनाए।
सय रुपैयाँको टिकट काटेर कविता सुन्न आएकाहरुले पर्रर ताली बजाएर कविलाई हौस्याएका थिए । उनले छन्दका गीत र डेउडा पनि गाए । विवशको यो दोस्रो एकल वाचन हो । यस अघि गएको असोज ५ गते पोखरामा उनले यसैगरी कविता सुनाएका थिए।
शनिबार रचना वाचन समूहको प्रस्तुतिमा रोट्रयाक्ट क्लब अफ धनगढी, नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान गोदावरी र सुदूरपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई रैका ट्राभल्स, रुबस होटल लगायत संस्थाले सहयोग गरेका थिए।
कार्यक्रममा गायक शिशिर साधकको समूहले विवशका केही गीत गाएर दर्शकको मन जित्यो । कार्यक्रमको सुरुमै महाकाव्यकार मनिराज जोशीले कवि विवश र गायकको समूहलाई फूलमाला लगाइदिएका थिए।
कार्यक्रममा कविहरु पदमराज जोशी, टोपेन्द्र शाह रसिक, अभि अजनवी र जनक रसिकले विवशका सृजनामा आञ्चलिक स्वाद पाइने भन्दै तारिफ गरेका थिए । कवितामा मानवीय पीडाका गहिराईभित्र आस्था अड्याउने ठाउँ खोज्दै हिँडेका छन् विवश । विवश साँस्कृतिक अध्येता पनि हुन्।
उनका ‘विवशका स्रमाई, असौजको जून र यादै जनमभरि’ गरी तीन वटा गीति एल्बम, आफ्नै मनसँग र सैपालको आँगन कवितासँग्रह तथा कथा एउटै तिम्रो मेरो प्रकाशित छन्।
रेडियो नेपालबाट विसं २०६८ सालका लागि उनले उत्कृष्ट गीतकार पुरस्कार पाएका थिए । उनका तीन दर्जन गीत रेकर्ड भैसकेका छन्।
]]> बिना नर्भिक पुगिन् (भिडियाे) http://www.nagariknews.com/news/30735/ Sun, 19 Nov 2017 11:19:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30735/ प्रकाश पत्नी बिना मगर नर्भिक अस्पताल आइपुगेकी छन् । पतिको निधनपछि मगर आज बिहान कञ्चनपुरबाट राजधानी आइपुगेकी हुन् । अस्पताल परिसरमा उनी निकै हतास देखिएकी थिइन् ।
काठमाडौं- प्रकाश पत्नी बिना मगर नर्भिक अस्पताल आइपुगेकी छिन् । पतिको निधनपछि मगर आज बिहान कञ्चनपुरबाट राजधानी आइपुगेकी हुन् । अस्पताल परिसरमा उनी निकै हतास देखिएकी थिइन् ।
]]> ‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड http://www.nagariknews.com/news/30731/ Sun, 19 Nov 2017 11:16:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30731/ दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को अवार्ड जितेको छ।
काठमाडौं– दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को अवार्ड जितेको छ।
राजनीतिक द्वन्द्वका कारण युवाहरू कसरी आफ्ना सपना त्यागेर पलायन हुन बाध्य भए भन्ने कथालाई तीन पात्रमार्फत प्रस्तुत गरिएको फिल्मले सो अवार्ड पाएको हो । नविन सुब्बा निर्देशित फिल्म कोलकाताको फेस्टिभलमा अवार्ड जित्ने पहिलो नेपाली फिल्म बनेको छ।
फिल्म निर्माण भएको करिब ७ वर्षपछि प्रदर्शनका लागि तयार फिल्म केही समयअघि दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित ‘बुसान फिल्म फेस्टिभल’ छानिएको थियो । फिल्ममा कर्मा, सुवर्ण थापा, निखिल गुरुङ, माल्भिका सुब्बा, माला लिम्बू आदि कलाकारको अभिनय रहेको छ । राजेश गोङजु र शोभा चन्दको पटकथा रहेको फिल्मलाई शोभा चन्दले नै सम्पादन गरेकी हुन् । फिल्ममा सोहम ढकाल र पदम सुब्बाको लगानी रहेको छ।
फेस्टिभलमा ‘इनोभेसन इन मुभिङ इमेज सेक्सन’मा फ्रान्सेली निर्देशक मार्सिला सेड निर्देशित फिल्म ‘लस पेरोस’ले ‘बेष्ट फिल्म’, आइसल्याण्डका निर्देशक आशा हेल्गा झोर्लेफेडेटिरको ‘द स्वान’ले ‘बेष्ट डिरेक्टर’ र पोल्याण्डका निर्देशक जोआन्ना क्रोस कुजा र क्राइजेक्टर क्राउज निर्देशित ‘बर्डस् आर सिङ्गिङ इन किगाली’ले ‘जुरी अवार्ड’ जितेको थियो ।
‘इन्डियन ल्याङवेज फिल्म’ विधामा चेझियान राको ‘टु लेट’ले ‘बेष्ट फिल्म’, डा. बिजुकुमार दामोदरनको ‘साउण्ड अफ साइलेन्स’ले ‘बेस्ट डिरेक्टर’ र पंक्षाक्छरीको ‘पठु्म्मा’ले ‘जुरी अवार्ड’ पाएको थियो।
त्यस्तै ‘नेशनल सर्ट एन्ड डकुमेन्ट्री कम्पिटिसन’मा आकांक्षा सुद सिंह निर्देशित ‘मृत्युभोजः द डेथ फिस्ट’ले ‘बेष्ट डकुमेन्ट्री’ र अमृतांशु निर्देशित ‘चाहतके गुबारे’ले ‘बेस्ट सर्ट फिल्म’को अवार्ड चुमेको थियो।
]]> गेटाफेको सहज जित http://www.nagariknews.com/news/30730/ Sun, 19 Nov 2017 11:12:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30730/ स्पेनिस ला लिगाअन्र्तगत शनिबार सम्पन्न खेलमा गेटाफेले आल्भेसमाथि ४–० को सहज जित हात पारेको छ। गेटाफेको जितमा एन्जेल रोड्रिग्वेजले दुई तथा मार्केल बर्गारा र जर्ज मोलिनाले समान १ एक गोल गरेका थिए।
मड्रिड – स्पेनिस ला लिगाअन्र्तगत शनिबार सम्पन्न खेलमा गेटाफेले आल्भेसमाथि ४–० को सहज जित हात पारेको छ।
गेटाफेको जितमा एन्जेल रोड्रिग्वेजले दुई तथा मार्केल बर्गारा र जर्ज मोलिनाले समान १ एक गोल गरेका थिए।
खेलको छैटौं मिनेटमा बर्गाराले गरेको गोलमा गेटाफेले अग्रता लिएको थियो । त्यसको तीन मिनेटपछि मोलिनाले पेनाल्टीमा गोल गर्दै गेटाफेको अग्रता दोब्बर पारेका थिए।
५३औं मिनेटमा रोड्रिग्वेजले गोल गर्दै टोलीको अग्रता बढाएका थिए । ६४औं मिनेटमा रोड्रिग्वेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल पूरा गरेपछि टोलीको जित सुनिश्चित भयो।
यस जितपछि १२ खेलको समाप्तिमा १६ अंक जोडेको गेटाफे १०औं स्थानमा उक्लिएको छ । समान खेलमा ६ अंक जोडेको आल्भेस १८औं स्थानमा छ, जुन रेलिगेसन क्षेत्र हो।
यसअघि शुक्रबार सम्पन्न खेलमा रियाल सोसिडाड र जिरोनाले १–१ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका थिए ।
]]> श्रीलंकाको गतिलो सुरुआत http://www.nagariknews.com/news/30729/ Sun, 19 Nov 2017 10:56:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30729/ लेहरु थिरामाने र एन्जेलो म्याथ्युजको अर्धशतक प्रेरित श्रीलंकाले शनिबार भारतविरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङमा गतिलो सुरुआत गरेको छ। तेस्रो दिनको खेल समाप्तिमा श्रीलंका १६५–४ मा खेलिरहेको छ र टोली ७ रनले पछि छ । कप्तान दिनेश चण्डीमल अविजित १३ र विकेटकिपर ब्याट्सम्यान निरोशान डिकबेला अविजित १४ रनमा खेलिरहेका छन् । १६ बल खेलेका डिकबेलाले २ चौका प्रहार गरे।
कोलकाता– लेहरु थिरामाने र एन्जेलो म्याथ्युजको अर्धशतक प्रेरित श्रीलंकाले शनिबार भारतविरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङमा गतिलो सुरुआत गरेको छ।
तेस्रो दिनको खेल समाप्तिमा श्रीलंका १६५–४ मा खेलिरहेको छ र टोली ७ रनले पछि छ । कप्तान दिनेश चण्डीमल अविजित १३ र विकेटकिपर ब्याट्सम्यान निरोशान डिकबेला अविजित १४ रनमा खेलिरहेका छन् । १६ बल खेलेका डिकबेलाले २ चौका प्रहार गरे।
३४–२ को स्थितिमा ब्याटिङका लागि आएका थिरामानेले तेस्रो विकेटका लागि ९९ रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ उकासेका थिए । समान ९४/९४ बल खेलेका म्याथ्युज र थिरामानेले समान ८÷८ चौकाको मद्दतमा क्रमशः ५२ र ५१ रन जोडेका थिए।
भारतका उमेश यादव र विनय कुमारले समान दुई÷दुई विकेट लिए ।
यसअघि ७४–५ बाट तेस्रो दिनको खेल सुरु गरेको भारतले थप ९८ रन जोड्दा बाँकी ५ विकेट गुमाएको थियो ।
भारतका चेतेश्वर पूजाराले ५२ रन जोड्नुबाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन् । १ सय १७ बल खेलेका पूजाराले १० चौका प्रहार गरे । त्यस्तै ऋद्धिमन शाहले २९ र रवीन्द्र जडेजाले २२ रनको योगदान दिए ।
भारतलाई पहिलो इनिङमा सस्तोमा समेट्ने क्रममा श्रीलंकाका सुरंगा लकमलले ४ तथा दिलरुवान परेरा, लेहरु गामागे र धसुन सनाकाले समान २÷२ विकेट लिए।
]]> सन्तोषको जित http://www.nagariknews.com/news/30728/ Sun, 19 Nov 2017 10:50:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30728/ एपिएफका सन्तोष खत्रीले राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १४औं राष्ट्रिय लन टेनिसको राउन्ड रोबिन लिगमा विजयी सुरुआत गरेका छन् । पुरुष सिंगल्समा खत्रीले पश्चिमाञ्चलका प्रदीप खड्कालाई ६–३, ६–३ ले पराजित गरेका छन्।
काठमाडौं – एपिएफका सन्तोष खत्रीले राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १४औं राष्ट्रिय लन टेनिसको राउन्ड रोबिन लिगमा विजयी सुरुआत गरेका छन् । पुरुष सिंगल्समा खत्रीले पश्चिमाञ्चलका प्रदीप खड्कालाई ६–३, ६–३ ले पराजित गरेका छन्।
त्यस्तै नेपाल प्रहरी क्लबका कमलबहादुर भण्डारीले प्रहरीकै दावा शेर्पालाई ६–२, ४–६, ६–०, पश्चिमाञ्चलका अभिषेक बाँस्तोलाले एपीएफका श्रीराम मगरलाई ६–०, ६–० तथा नेपाल आर्मीका संरक्षकभूषण वज्राचार्यले आर्मीकै प्रणव खनाललाई ७–५, ६–३ सेटमा पराजित गरे । महिला सिंगल्समा प्रहरीकी माहिका राणाले पश्चिमाञ्चलकी गंगा शर्मालाई ६–२, ६–३, प्रहरीकै मायांका राणाले एपिएफकी भगवती विकलाई ६–४, ६–२ तथा एपिएफकी एनी माथेमाले एपिएफकै विजिशा श्रेष्ठलाई ६–३, ६–१ ले हराए । आर्मीकी अभिलाषा विष्टले वाक ओभर पाइन् । राउन्ड रोविन लिगमा ८ पुरुष र ८ महिला गरी १६ खेलाडी सहभागी छन्।
राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत राष्ट्रिय लनटेनिसको महिला सिंगल्समा इरा रावत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै भगवती विक ।
]]> सरकार ! सुरक्षा देऊ http://www.nagariknews.com/news/30727/ Sun, 19 Nov 2017 10:46:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30727/ भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेका उम्मेदवारदेखि सर्वसाधारणमाथि जे जसरी शृंखलाबद्ध रूपमा बम आक्रमणका घटना भएका छन्, त्यो आततायी कदम हो, त्यस्ता घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस्ता घटनामा संलग्न जोकोही भए पनि उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । विगतका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नेदेखि आगामी दिनमा यस किसिमको घटना नै हुन नदिनेतर्फ सरकारको अग्रसरता जरुरी छ । उम्मेदवार, राजनीतिक कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणलाई ‘टार्गेट’ गर्दै भएका यस किसिमका घटना आगामी दिनमा रोक्न नसके त्यो सरकारकै असफलता हुनेछ । यस किसिमका घटनाका कारण उम्मेदवारहरूले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकार र मतदाताको भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दुवैको हनन भएको छ । उम्मेदवारमाथि बम आक्रमणका घटनाबाट निर्वाचन आयोगले समेत आफू स्तब्ध भएको जनाउँदै सरकारलाई थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनिसकेको छ । यस अवस्थामा भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।
भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।
सुरुका दिनमा वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवार त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमाथि आक्रमण भयो, जसमा माओवादीबाट विभाजन भएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताकार्यकर्ता संलग्न रहेको निष्कर्ष रह्यो । तर, घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन न सरकारले नै ध्यान दियो न अन्य पार्टीका नेताकार्यकर्ताले नै घटनाको भत्र्सना गर्न सके । सरकार र दलहरुको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनविरोधी शक्तिहरुले बिस्तारै एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि समेत आक्रमणको तारो बनाए भने अहिले जुनसुकै दलका जोसुकै उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्न थालेका छन् । हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न नसक्दाको सरकारी असफलतादेखि हिंसाको विरोध गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरुको निरीहताको कारण पनि यस किसिमका घटनामा बढोत्तरी आएको पाइन्छ । हिंसा जोमाथि होस्, त्यो हिंसा नै हो र त्यो निन्दनीय क्रियाकलाप नै हो । यस्तो आपराधिक क्रियाकलापको निन्दा गर्नसमेत व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने राजनीतिक अवसरवादले नै यस किसिमको हिंसालाई बढवा दिइरहेको छ । त्यसैले सरकारमा रहेकादेखि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले यस किसिमको राजनीतिक अवसरवादलाई त्याग्दै हिंसाको विरोधमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भने सरकारले चुनावी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । र, यो अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, व्यवहारमै देखिन जरुरी छ।
शनिबार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित गर्दै बम प्रहार भएको छ भने रौतहट र भोजपुरमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई ‘टार्गेट’ गर्दै बम विस्फोट गरिएको छ जसमा एक बालकसहित ११ जना घाइते भएका छन् । यसअघि कांग्रेस नेता रामशरण महत, अमरसिंह पुन, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीदेखि एमाले नेता शेरधन राईसमेतलाई लक्षित गर्दै बम प्रहारका घटना भएका छन् । बिहीबार बागलुङको गल्कोटमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभास्थल नजिक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुग्नुअघि बम विस्फोट गराइएको थियो । जताततै र जोसुकैमाथि पनि बम प्रहारका घटना हुनुले सुरक्षा प्रबन्ध अत्यन्तै फितलो भएको देखिन्छ । २०७० सालको चुनावमा धेरैवटा राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गर्दै मोर्चा नै निर्माण गर्दासमेत यस्ता किसिमका घटना हुन पाएको थिएन । उतिबेला सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गर्दै सरकारले जुन सतर्कता अपनाएको थियो, अहिलेको सरकारमा त्यस किसिमको कुनै गम्भीरता नै नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेको बताउनुले सुरक्षा प्रबन्धको कमजोर अवस्था र सरकारी असफलतालाई देखाउँछ । विगतमा ६ महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा यस किसिमको घटना भएको थिएन । अहिले एकाएक सुरक्षा चुनौती थपिनुले सरकारको सुरक्षा प्रबन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न थालेपछि यस किसिमको सुरक्षा चुनौती थपिनु आश्चर्यलाग्दो छ । देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा हिंसाका घटना भए वा यही सुरक्षा चुनौती थपिएको नाममा कुनै पनि रुपको अतिवादी शक्ति हाबी भयो भने त्यसको अपजसको भागीदार देउवा स्वंय हुनुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले यो पक्षलाई ध्यान दिँदै सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन र भयरहित निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।
]]> फिस्टेको खुट्टा र प्रमुख दलको घोषणापत्र http://www.nagariknews.com/news/30726/ Sun, 19 Nov 2017 10:42:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30726/ ठूला दलका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरी प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रका प्रतिहरू हातमा परिसकेपछि पनि कुनै पनि पत्रकारले नेताहरूलाई तिनले चार वर्षअघि घोषणा गरेका के के बँुदा कार्यान्वयनमा, ल्याए त ? भनेर सोध्ने दायित्व पूरा गर्ने साहस पनि देखाएनन् ।
]]> समाजवादको बाटो http://www.nagariknews.com/news/30725/ Sun, 19 Nov 2017 10:34:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30725/ निर्वाचनको सफलतासँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि मूलतः संक्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र नेपाल राष्ट्रले नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली जनताले सदियौँदेखि देखेको सपनाले अन्ततः मूर्तरूप लिनेछ।
नेपाल यतिबेला पुरानो केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । नेपालको नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रका रूपमा नेपालको परिचय स्थापित गरेको छ । यसै संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचनको सफलतासँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि मूलतः संक्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र नेपाल राष्ट्रले नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली जनताले सदियौँदेखि देखेको सपनाले अन्ततः मूर्तरूप लिनेछ।
हामी यतिबेला शासकीय संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा पाइला टेकेका छौँ । नेपाली समाजले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय संक्रमणकालीन व्यवस्थाको चरण पार गर्न अझै समय पर्खनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नेपालको संविधानको मूल सार समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएबाट नेपाल आगामी दिनमा कुनै न कुनै प्रकारले समुन्नत समाजवादी राष्ट्र बन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ । समाजवाद उन्मुख नेपालको स्थानीय तह, प्रान्तीय तह र संघीय तहमा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय विकास र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कस्तो हुने भन्ने कुरामा प्रस्ट भएको पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा यस नीतिपत्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत (जल, जंगल, जमिन) को दीगो व्यवस्थापन लगायतको विषयमा कस्तो सिद्धान्त नीति अपनाउनुपर्छ भनी चर्चा गरिएको छ । यस नीतिपत्रका आधारमा तिनै तह स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकार तथा सभामा यससम्बन्धी नीतिगत बहस पैरवी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
निर्वाचनको सफलतासँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि मूलतः संक्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र नेपाल राष्ट्रले नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली जनताले सदियौँदेखि देखेको सपनाले अन्ततः मूर्तरूप लिनेछ ।
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि उठाउनुपर्ने कदम
समाजवादी शासन अर्थ व्यवस्थाका मूलभूत विशेषताहरू भनेका उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधन स्रोतमाथि स्थानीयजन, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पुँजीमा वृद्धि, प्रगतिशील कर प्रणाली, पुँजीको पुनःवितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसंगठनको विकास र समृद्ध समावेशी राष्ट्र निर्माण आदि हुन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जंगल, जमिन) को दीगो व्यवस्थापन गर्दा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका यिनै विशेषताहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ :
क) उत्पादकत्वमा वृद्धि ः नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जंगल, जमिन) र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा व्यापक परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको छ । हामी सामान्य उत्पादनका लागि पनि अन्य देशमा निर्भर हुने गरेका छौँ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने र अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको माटोको उर्वराशक्ति ज्यादै राम्रो हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट खाद्यान्न सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ । नेपालको वन जंगलको दीगो व्यवस्थापन गरेर अर्बांै मूल्यको जडीबुटी र १५ करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ उत्पादन गरी १५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिई विदेशमा निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर वर्षेनि अर्बाैंकाे काठ र जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा सामग्रीहरू नेपाल आयात भइरहेका छन् । न्यून संख्यामा स्थापना भएका उद्योग, कलकारखानाहरू निजीकरणका नाममा बिक्री हुँदा र राजनीतिक हस्तक्षेप भई व्यवस्थापन लथालिंग हुँदा आज नेपाल हरेक औद्योगिक उत्पादनमा परनिर्भर रहन परेको छ । यस्तो अवस्थामा अब संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार र सभाले उपर्युक्त प्रकारको नीति, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरी प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसै गरी उपयुक्त प्रकारको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालको कलकारखाना र उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । बन्द उद्योग सञ्चालनमा सरकारले चासो दिनुका साथै नयाँ र वनजंगलमा आधारित उद्योग खोल्नमा प्रेरित गर्नेखालको नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
ख) उत्पादक वर्ग (स्थानीय समुदाय र श्रमिक) को हकहितको रक्षा :
प्राकृतिक साधन स्रोत र उद्योग कलकारखानाहरू उत्पादनका साधन हुन् भन्ने कुरा माथि नै चर्चा गरिसकियो । यी उत्पादनका साधन स्रोतमाथि उत्पादक वर्ग (स्थानीय समुदाय र श्रमिक) को अधिकार र सम्मानजनक सहभागिता भएन भने उत्पादकत्वमा कदापि वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उपर्युक्त प्रकारको प्रविधि, पुँजी, सीप र लगानीको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि जल जमिन र जंगलमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिला आदिको सार्वभौम अधिकारको ग्यारेन्टी नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता व्यापक रूपमा सुधार गरी वनको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । वनको दीगो व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई उपयुक्त प्रकारको पुँजी र प्रविधि लगाई वन उद्यम, उद्योग र कलकारखाना स्थापना गरेमा वन र वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक वर्ग नै प्रमुख रूपमा उत्पादक वर्ग हुन् । यस उत्पादक वर्गको हक, हित, अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र यस वर्गलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित भएर कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । उत्पादक वर्गलाई राज्यले प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ।
ग) स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास
प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, उद्योग कलकारखाना र सेवा क्षेत्रबाट भएको उत्पादनलाई बजारमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश गर्न दिई पुँजीबजारको विकास हुन दिनुपर्छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय उत्पादनको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र बजार र पुँजी विकासमा कसैको पनि एकाधिकार र दादागिरी नचलोस् भनी राज्यले आवश्यक पर्दा उपयुक्त प्रकारको हस्तक्षेप गरी स्वतन्त्र बजारलाई सही बाटोमा डाेर्‍याउनुपर्छ । बजार र पुँजीको विकासले नै समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको बाटो तय गर्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याएर कार्य गर्नुपर्छ । राज्यले लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । निर्बाध रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण नहुँदासम्म उत्पादनको वृद्धि सम्भव छैन ।
घ) प्रगतिशील कर प्रणाली :
स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास सँगसँगै त्यसबाट हुने कारोबार र आम्दानीमा प्रगतिशील ढंगले कर प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । यसो भनेको धेरै कमाइ गर्नेले धेरै कर तिर्ने, थोरै कमाइ गर्नेले थोरै कर तिर्ने र कमाइ गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न वर्गले कर छुट प्राप्त गर्ने कर प्रणाली नै प्रगतिशील कर प्रणाली हो । यस्तो प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनका प्रारम्भिक उत्पादक वर्ग (सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पारिवारिक निजी वन, उत्पादक समूह, किसान, मजदुर, आदिवासी, जनजाति, दलित महिला र अपांगता भएका) समुदायलाई करमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादन र बजारमा बिक्री हुँदा आवश्यकता अनुसारको कर निर्धारण गरी लागु गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याई प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्दा राज्यको ढुकुटी वृद्धि हुन्छ । करलाई जनताको रहरको विषयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
ङ) पुँजीको पूर्ण वितरण र राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँड :
समाजवाद उन्मुख, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आर्जन गरेको पुँजी र जम्मा भएको राजस्वलाई स्थिर भएर रहन दिनु हुँदैन । पैसालाई निष्क्रिय रहन नदिई परिचालन गर्नुपर्छ । पँुजी र राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यस्तो पँुजी र राजस्वको बाँडफाँड गर्दा गरिब, विपन्नको जीविकोपार्जनको समस्या समाधान गर्न, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, शारीरिक असक्त, बालबालिका आदिका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी पछाडि पािरएको दुर्गम र अन्य क्षेत्रमा विशेष बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्नुपर्छ । न्यायोचित ढंगले पुँजी र राजस्वको बाँडफाँड नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणको अर्को व्यवस्था हो । यसो भएमा मात्र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुन्छ।
३. स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण :
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको नेपालका सबैखाले विद्यमान चुनौती र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नयाँ सम्भावनासहितको स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो । यसका लागि राज्यका सबै अंग, समाजका सबै पक्ष, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र एवं स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार तथा संसद्ले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई परिपालना गर्दै नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । चौतर्फी दिगो विकास र समाजवाद उन्मुख शासन र अर्थ व्यवस्थाले नेपालको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध, समावेशी राष्ट्र निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउँछ । यही नै हाम्रो गन्तव्यको यात्रा हो ।
(लेखक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् )
]]> कस्टमर कल्चर र नेपाली समाज http://www.nagariknews.com/news/30724/ Sun, 19 Nov 2017 10:28:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30724/ कस्टमर इज अलवेज राइट, यो उत्तरआधुनिकतावादी पुँँजीवादी समाजमा पछिल्लो समय स्थापित सर्वमान्य धारणा हो । कस्टमर वा ग्राहक तथा सेवाग्राही नै जहिले पनि सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान समयको व्यावसायिक मन्त्र हो । कस्टमर भनेको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति हो जो खरिदकर्ता व्यापारी वा उपभोक्ता पनि हुन सक्छ । सेवाग्राहीले पैसा तिर्ने भएकाले उसलाई सर्वेसर्वा ठानिएको हो ।
कस्टमर इज अलवेज राइट, यो उत्तरआधुनिकतावादी पुँँजीवादी समाजमा पछिल्लो समय स्थापित सर्वमान्य धारणा हो । कस्टमर वा ग्राहक तथा सेवाग्राही नै जहिले पनि सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने मान्यता वर्तमान समयको व्यावसायिक मन्त्र हो । कस्टमर भनेको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति हो जो खरिदकर्ता व्यापारी वा उपभोक्ता पनि हुन सक्छ । सेवाग्राहीले पैसा तिर्ने भएकाले उसलाई सर्वेसर्वा ठानिएको हो।
हरेक कस्टमर व्यापारीहरूका लागि समान स्तरको हुँदैन । उसको स्तर उसले खर्च गर्ने पैसामा आधारित हुन्छ अर्थात् जसले बढी पैसा खर्च गर्छ उसैको स्तर माथि हुन्छ । बढी खर्च गर्ने कस्टमरले व्यापारीबाट बढी सेवा र सुविधा पनि पाइरहेको हुन्छ । यस आधारमा व्यापारीहरूले ग्राहकको सेवा नगरेर उसले खर्च गर्ने पैसाको सेवा गरिरहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा बढी खर्च गर्ने कस्टमरमात्र अलवेज राइट हुन्छ।
समयले अहिलेको मान्छेलाई कस्टमरमा परिणत गरिदिएको छ । अहिले मान्छे हरेक क्षण र स्थानमा कस्टमर बन्न बाध्य छ । उसको बिहानदेखि बेलुकासम्मको दैनिकी कस्टमरकै रूपमा बितिरहेको हुन्छ । बिहान उठेर चियाका निम्ति दूध पसल वा चिया पसलमा ग्राहक बनेर सुरु भएको दैनिकी साइकलमा पत्रिका बोकेर घरमै पु¥याउन आएको व्यक्तिले पनि ग्राहककै रूपमा पत्रिका दिएर जान्छ । नियमित ग्राहकका रूपमा तरकारीमा दुई रुपैयाँ छुट पाएर दंग परी खाना खाएर अफिस जान माइक्रोमा चढ्दा निरीह ग्राहक भई कोचिएर बस्नुपर्छ । अफिस पुग्न दश मिनेट मात्र ढिलो भए सित्तैमा खाने ग्राहकलाई जस्तै हाकिमले व्यवहार गर्दछ । दिनभर अफिसमा बस्दा महसुस हुन्छ – यहाँ पनि धेरै खर्च गर्ने ग्राहकले धेरै सुविधा पाएजस्तै धेरै काम गर्नसक्ने कर्मचारीले नै बढी सुविधा पाउँछ । भलै त्यो ‘धेरै काम’को अर्थ सान्दर्भिक रूपमा धेरै नै हुनसक्छ । दिउँसो खाजा खान चमेनामा ग्राहक नै बन्नुपर्छ भने बेलुकाको रसपानमा पनि ग्राहककै भूमिका निभाउनुपर्छ । ट्याक्सी चढेर अबेर घर जाँदा राम्रै खर्च पाए ट्याक्सीवाला पनि घरमाथिसम्म नै सेवा गर्न तत्पर हुन्छ। घरभित्र परिवारलाई खर्चपानी, सेवासुविधा कति प्रदान गर्न सकिएको छ सोही अनुपातमा स्वागत पनि पाइन्छ । उसले खर्च गर्न सक्ने (आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक) क्षमताका आधारमा सेवा प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । यसरी आजको मान्छे घरदेखि अफिससम्म, बाटोदेखि पसलसम्म जताततै कस्टमर वा ग्राहक बन्न बाध्य रहेको देखिन्छ।
व्यापक दृष्टिले नजर घुमाउने हो भने घरपरिवार, छरछिमेक, आफ्नोआफन्तमा पनि यस्तै प्रकारको कस्टमर कल्चर नै रहेको देखिन्छ । धेरै माया, धेरै खर्च र धेरै हेरचाह गर्ने बाआमा, छोराछारी वा प्रेमिपे्रमिका नै बढी प्यारो भएको हुन्छ । मीठामीठा धेरै कोशेली ल्याउने र खर्च पनि दिने मामा नै भान्जाभान्जीको प्यारो हुन्छ । आफ्नो लागि समय खर्च गर्न सक्ने र अन्य सहयोग गर्न सक्ने छिमेकी नै प्यारो हुन्छ।
सभ्यताको विकासमा सफलताको शिखरतर्फ उन्मुख रहेको अनुभूतिमा रमाउने मान्छेले आफ्नै अस्तित्व गुमाइरहेको छ । उसको जीवन हरेक स्थान र हरेक पलमा ग्राहक बनेर बितिरहेको छ । जीवनका हरेक पक्षहरूमा व्यापारको भेष घुसेको देखिन्छ । छोरो–छोरी जन्मिएकोमा खुसी र दुःखी हुनु पनि व्यापारिक दृष्टि नै रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गरिन्छ । वृद्ध बाबुआमा पाल्ने छोराले जिउनी सम्पत्ती राख्न पाउने कानुनमा पनि व्यापारिकपन नै देखिन्छ, ‘सेवा गरेबापतको मेवा’ । तसर्थ जीवनरुपी व्यापारमा मान्छे केवल कस्टमर मात्र भएको देखिन्छ र वर्तमान नेपाली समाजको यथार्थ पनि यसभन्दा पृथक् रहेको देखिँदैन।
]]> अनर्थ लगाइएको अर्थतन्त्र http://www.nagariknews.com/news/30722/ Sun, 19 Nov 2017 10:22:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30722/ हामी सम्पन्नतातिर लम्कने भन्छौँ तर अर्थतन्त्रले यसरी अल्झाएको छ कि अघि बढ्ने कुरा पहाड चढ्नुजस्तै कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ । खर्च गर्न कमाउनुपर्छ, खर्च गर्न खोज्दैमा खल्ती रित्तो छ भने कसरी गर्ने, अनि खर्च नगरी कमाउन सकिँदैन । खर्च अर्थात् लगानी, लगानीका लागि पर्याप्त रकम चाहिन्छ । असारमा धान रोप्यो भने मंसिरमा धान भित्र्याउन पाइन्छ । भन्ने गरिन्छ, मानु रोपेर मुरी फलाउने । यस्तै गति लागू हुन्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि।
]]> प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रकाशको निधनप्रति श्रदाञ्जली अर्पण http://www.nagariknews.com/news/30723/ Sun, 19 Nov 2017 10:21:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30723/ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाश दाहालको निधनप्रति श्रदाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उनले ट्विटमार्फत् श्रदाञ्जली अर्पण गरेका हुन्।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाश दाहालको निधनप्रति श्रदाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उनले ट्विटमार्फत् श्रदाञ्जली अर्पण गरेका हुन्।
'पूर्वप्रधानमन्त्री एवं मेरा मित्र पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको निधनको खबरले मर्माहत भएको छु। मृतकप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनलाई यस दुःखद घडीमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु,' प्रधानमन्त्री देउवाले लेखेका छन्।
]]> असहज क्यान्सर रोग http://www.nagariknews.com/news/30721/ Sun, 19 Nov 2017 10:16:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30721/ ‘क्यान्सर’ रोग सुन्नेबित्तिकै जो कोहीको पनि आङ सिरिंग हुन्छ । मानव शरीर अनेक प्रकारका कोष, तन्तु र अंगप्रत्यंगबाट बनेको हुन्छ । यी प्रत्येक अंगप्रत्यंगमा क्यान्सर हुन सक्छ । शरीरको कुनै अंग पनि त्यस्तो छैन, जसमा क्यान्सरको असर नपरोस् । मानव शरीरका सबै अंगमा क्यान्सरको संक्रमण हुन सक्छ।
‘क्यान्सर’ रोग सुन्नेबित्तिकै जो कोहीको पनि आङ सिरिंग हुन्छ । मानव शरीर अनेक प्रकारका कोष, तन्तु र अंगप्रत्यंगबाट बनेको हुन्छ । यी प्रत्येक अंगप्रत्यंगमा क्यान्सर हुन सक्छ । शरीरको कुनै अंग पनि त्यस्तो छैन, जसमा क्यान्सरको असर नपरोस् । मानव शरीरका सबै अंगमा क्यान्सरको संक्रमण हुन सक्छ।
मानव शरीरमा कोषहरूको प्रकृतिअनुसार उत्पत्ति हुन्छ र वृद्धि हुन्छ साथै कोषहरूले गर्नुपर्ने कार्य गर्छन् र समय पुगेपछि कोषको अन्त निश्चित रूपमा हुन्छ । फेरि नयाँ कोषको सिर्जना हुन्छ । यो चलिरहन्छ । ‘क्यान्सर’ पनि यिनै कोषबाट उत्पत्ति हुने रोग हो । यस्ता कोषहरूले कुनै पनि नियमलाई पालन नगरी विकास भइरहेका हुन्छन् । यसरी नियमको पालना नगरी बढ्ने कोषलाई क्यान्सर सेल भनिन्छ । यो क्यान्सर सेल एकदमै चाँडो बढ्ने गर्छ । यो क्यान्सर कोष, गलगाँड, रुद्रघन्टी, जिब्रो, अरू अंग र ग्रन्थिहरूमा उत्पत्ति भएमा चाँडो बढ्ने हुनाले यसको असर परेका अंग फुल्ने तथा सतहमा घाउसमेत हुन सक्छ । अतः यो बहुरूपी पाराले देखापर्छ।
बेतालले कोष बढ्ने क्रममा अरू कोष तथा तन्तु र अंगलाई चाहिने खाद्य तथा अरू पदार्थलाई उपभोग पनि यिनै क्यान्सरका कोषहरूले गरिदिन्छ । फलस्वरूप स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याई रोगको लक्षण देखापर्छ र बिरामीको मृत्युसम्म हुन्छ । ‘क्यान्सर’ रोग पृथ्वीका मानव जातिलगायत जनावर, वनस्पतीमा पनि हुन सक्छ।
यो रोग कुनै पनि अंगमा चाँडो बढ्ने तथा नियम नमानी बढ्ने भएकाले नै यसलाई अर्बुद रोग पनि भन्ने गरिन्छ । यो रोग शरीरमा जस्तैः छाला, श्वासनली, मुख, जिब्रोको सतह, स्तन आदिमा प्रचुर मात्रामा भएको पाइएको छ । शरीरको साधारण क्रियाजस्तै लाग्ने हुनाले यसलाई सुरुआतमा पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ । अतः सुरुमा लक्षण देखा नपरेका कारण मान्छे स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्न चाहँदैन । तर जब लक्षण देखापर्छ तब यो रोग धेरै बढिसकेको हुन्छ । अतः स्वास्थ्य जाँच गरिरहनु जरुरी छ।
क्यान्सर बहु कारणले लाग्ने रोग हो । क्यान्सर ३३ प्रतिशत वातावरणबाट र १० प्रतिशत जाति वंशाणुगत भएको पाइएको छ । यो रोग बढ्ने क्रममा छ । मान्छेको आनीबानीले पनि फरक पार्छ यसमा । खानानलीबाट, पेय पदार्थबाट भित्रिएर वा क्यान्सरमा सेवा पुर्‍याउने क्यान्सर पैदा गर्ने रसायन भएका फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेमा क्यान्सर देखिन्छ या भएको छ। साँच्चै मानवको बानी, आचरण, व्यवहार कुलतबाट यो रोग हुने भएकाले यसलाई बहुकारक रोग पनि भनिएको हो। यद्यपि यसको उपचार पनि बहु माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । जस्तै : चिरफार, औषधि उपचार र रेडियो थेरापीबाट गरिन्छ । आजको विज्ञानको खोज तथा आविष्कारका कारण क्यान्सरसँग लड्न हौसला मिलेको छ।
जिब्रोमा भए वरिपरि सबै ग्रन्थिमा भए ग्रन्थिबाट लिम्फबाट, रगतको ठूला ठूलानली हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा सर्ने गर्छ । नाक, कान, घाँटी लगायत टाउकोमा भएमा पत्ता लगाउन असाध्यै कठिन हुन्छ । कुनै बिरामीलाई गलाको क्यान्सर साथै फोक्सोको पनि क्यान्सर उही प्रकारको हुन सक्छ । यसलाई सिन्क्रोनस क्यान्सर भनिन्छ । अर्को गलाको क्यान्सर र खानानलीको अर्को प्रकारको रोग हुनसक्छ । त्यस्तालाई मेताक्रोनस क्यान्सर भनिन्छ । यसरी नै गर्दनको गण्डमाला जस्तै हुने रोग पनि असहज क्यान्सर हो । क्यान्सरको उपचार गरेर निको नहुने तर जीवित रहेका बिरामीलाई मानव जीवन चलुन्जेलसम्म त माया, ममता, हेरविचार, निगरानी राख्न जरुरी छ । चाहे घरैमा होस्, अस्पतालमा होस्, उपचार गर्ने वैज्ञानिक विधि अपनाएर वा मनोचिकित्सकको संलग्नतामा गर्नुपर्छ।
]]> अस्पताल परिसरमा आफन्तको रुवाबासी, अन्य स्तब्ध (फाेटाे फिचर) http://www.nagariknews.com/news/30720/ Sun, 19 Nov 2017 10:00:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30720/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको निधनको खबरसँगै नर्भिक अस्पतालमा आपन्त र शुभेच्छुकहरु आउने क्रम जारी छ। नर्भिक अस्पतालका महाप्रबन्धक रवि शर्माले दाहालको निधन भएको पुष्टि गरेका छन।
]]> प्रकाश पत्नी मगर तीन वर्षीय छोरासहित काठमाडौं आउँदै http://www.nagariknews.com/news/30719/ Sun, 19 Nov 2017 09:47:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30719/ पति प्रकाश दाहालको निधनको खबरसँगै उनकी पत्नी बिना मगर छोरासहित काठमडौं उडेकी छन्। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ मा बाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारसमेत रहेकी मगर धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेकी हुन्। उनी तीन वर्षीय छोरासहित काठमाडौं आउँदैछन्।
]]> प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन http://www.nagariknews.com/news/30716/ Sun, 19 Nov 2017 09:41:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30716/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। काठमाडौंस्थित लाजिम्पाट निवासमा उनलाई अबेर राति हृदयघात भएपछि नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। बिहान साढे ५ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मुटु बन्द भइसकेको नर्भिक स्रोतले जानकारी दियो।
]]> बाबुराम भट्टराई पनि काठमाडौं आउँदै http://www.nagariknews.com/news/30718/ Sun, 19 Nov 2017 09:34:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30718/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको असमायिक निधनको खबरले नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई स्तब्ध भएका छन्। चुनावी प्रचारका लागि गोरखामा रहेका भट्टराई अन्तिम श्रदाञ्जली दिन काठमाडौं आउने भएका छन्।
]]> माझीगाउँको सन्देश : बाचा पूरा गर्नेलाई भोट http://www.nagariknews.com/news/30717/ Sun, 19 Nov 2017 09:22:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30717/ चौतारा–दोलालघाट सडकको बन्देउबाट धुले सडक हुँदै केही अघि बढेपछि आउने जामुने गाउँका माझी युवा टहरोमा दलीय झन्डा गाढ्दै थिए । अलि पर एक्लेबेसीमा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री टाँस्न व्यस्त माझी युवाको अर्को टोली भेटियो । इन्द्रावती फाँटको झुम्म बस्ती महादेवटार अझ रंगीन थियो । टहरोको धुरीमा दलीय झन्डा फहराउँदै पाखा, भित्तैभरि छपक्क प्रचार सामग्री टाँसेर माझी समुदाय स्वागतसाथ चुनावको प्रतीक्षामा छ ।
माझीगाउँ (सिन्धुपाल्चोक)- चौतारा–दोलालघाट सडकको बन्देउबाट धुले सडक हुँदै केही अघि बढेपछि आउने जामुने गाउँका माझी युवा टहरोमा दलीय झन्डा गाढ्दै थिए । अलि पर एक्लेबेसीमा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री टाँस्न व्यस्त माझी युवाको अर्को टोली भेटियो । इन्द्रावती फाँटको झुम्म बस्ती महादेवटार अझ रंगीन थियो । टहरोको धुरीमा दलीय झन्डा फहराउँदै पाखा, भित्तैभरि छपक्क प्रचार सामग्री टाँसेर माझी समुदाय स्वागतसाथ चुनावको प्रतीक्षामा छ ।
साँगाचोक, भीमटारस्थित पिछडिएका अल्पसंख्यक माझी समुदायलाई चुनावी सरगर्मीले ह्वात्तै छोपेको छ । गाउँमा सबै उम्मेदवार आइदिऊन् भन्ने चाहिरहेका उनीहरु कसलाई भोट दिने भनेर अहिलेसम्म खुलिसकेका छैनन् । सबै उम्मेदवारको बाचा सुनेपछि मात्र खुल्ने पक्षमा देखिए उनीहरु ।
‘जति मरिहत्ते गरुन्, भोजभतेरमा बिकेर भोट खस्नेवाला छैन,’ माटो र बाँसको टहरोअघि गाँसकै चिन्ताले घोत्लिरहेकी ७० वर्षीया सीता माझीले भनि, ‘मासु र रक्सीमा बिकेर भोट हाल्ने चलन इन्द्रावती नदीले बगाइसक्यो ।’ विगतका चुनावमा भोजभतेरमा बिक्दा गाउँ विकासमा पछाडि परेको दुःखेसो उनले पोखिन् ।
सीताले सबै कुरा बताउन नपाउँदै भोट माग्न राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा आइपुगे । सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका उनी यो माझीगाउँ आइपुग्ने पहिला उम्मेदवार रहेछन् । उनका विकासे बाचा सुन्न घरधन्दा र घर बनाइरहेका स्थानीय आइपुगे । राणा भोट माग्दै आफ्ना प्रतिबद्धता सुनाएर हिँडे । तर स्थानीयले भोट दिन्छु, दिन्न भनेर केही पनि भनेनन् ।
विगतमा दलका नेता तथा उम्मेदवारले गरेको बाचा एउटै पूरा नभएपछि माझी समुदायमा आक्रोश रहेछ । ‘गाउँका महिलालाई पानीको कम्ती दुःख छैन,’ पुनः समस्या सुनाउँदै वृद्धा सीताले भनिन्, ‘यत्रो फाँट सिँचाइ नपाएरै बाँझो छ । अहिलेसम्म कसैले केही गर्देका होइनन् ।’ गाउँमुनिबाट इन्द्रावती बगिरहे पनि खानेपानी र सिञ्चाइ सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाइन् ।
यहाँका बस्ती जामुने, भीमटार, एक्लेबेसी, महादेवस्थानमा २ सय भन्दाबढी घरधुरी माझी समुदायको बसोबास छ । कमाइले तीन महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि छन् । ‘गाउँमा नेताहरुसँग निकै आक्रोश छ,’ स्थानीय अहिलेसम्म नखुल्नुको कारण बताउँदै ४१ वर्षीय तेजबहादुर माझीले भने । गाउँलेले यसपटक न्यूनतम खानेपानी र सिञ्चाइ दिने बाचा गर्ने विश्वासिलो नेतालाई मात्र भोट हाल्न चाहेको उनले सुनाए । ‘सबै उम्मेदवारका बाचा सुनेपछि गाउँ सल्लाहमा एउटा साझा उम्मेदवारलाई भोट दिने तयारी छ,’ उनले भने ।
अधिकांश माझीसँग घरघडेरीबाहेक जग्गा छैन । भएको जग्गा पनि सिञ्चाइ अभावमा बाँझै रहन्छ । इन्द्रावतीमा माछा मार्ने मुख्य पेसा भएका उनीहरु भूकम्पले घर ढालेपछि झन् प्रताडित छन् । भूकम्पको ३० महिनापछि बल्ल स्थानीय घर बनाउन जुटेका छन् । गाउँमा विकासको नाममा धुले सडकबाहेक अरु केही देख्न पाइँदैन ।
२ सय माझी बालबालिका पढ्ने भूकम्पले ढालेको विद्यालय अझै पुनर्निर्माण भएको छैन । इन्द्रावतीबाट ढुंगा, गिटी निकालेर गुजारा गर्न उनीहरु पाउँदैनन् । नदीमा गुण्डाराज चल्दा बगरको स्वामित्वबाट माझी समुदाय वञ्चित हुनु परेको तेजबहादुरको गुनासो छ । उनका अनुसार गाउँलेले नदीमाथिको स्वामित्वलाई पनि भोट दिने सर्त बनाउनेछन् ।
माझी गाउँमा पहिलोपटक एसएसली पास गरेका गणेश माझी अहिले स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण गर्छन् । २०५७ मा उनले यो सफलता प्राप्त त्यसपछि २० जतिले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । उनका अनुसार गाउँमा विद्यालय भए पनि ८ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ । ‘थप अध्ययन गर्न दुई घन्टा पैदल हिँडेर साँगाचोक भन्ज्याङ पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
गाउँले अशिक्षित रहँदा पहिला–पहिलो भोजभतेरमा भोट दिने प्रवृत्ति रहेको उनी सुनाउँछन् । गाउँलेले धेरै कुरा बुझिसकेको र पछिल्लो समय गाउँमा चेतना लहर फैलिरहेकाले यसपटक त्यस्तो नहुने उनी बताउँछन् । ‘आश्वासनमात्र बाँड्नाले गाउँलेमा नेताप्रति आक्रोश छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि यो पटक भोजभतेरमा भोट बिक्दैन ।’
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीयले माझी एकता देखाएका थिए । आआफ्ना पार्टी नभनी उनीहरुले वडाध्यक्षमा आफ्नै समुदायका सुशील माझीलाई जिताए । अरुले भन्दा गाउँको दुःख बुझेको गाउँलेबाटै विकास हुने बुझाइले उनीहरुले सल्लाहमै उनलाई जिताएका थिए ।
]]> प्रदेश २ : ४८ पूर्वसांसद चुनावी मैदानमा http://www.nagariknews.com/news/30715/ Sun, 19 Nov 2017 08:33:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30715/ आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को ३२ स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारमध्ये ४८ जना यसअघि सांसद भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका २१, वाम गठबन्धनका १६ र मधेसी गठबन्धनका ११ जना उम्मेदवार यसअघि सांसद् भइसकेका राजनीतिज्ञ हुन् ।
काठमाडौं- आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को ३२ स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारमध्ये ४८ जना यसअघि सांसद भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका २१, वाम गठबन्धनका १६ र मधेसी गठबन्धनका ११ जना उम्मेदवार यसअघि सांसद् भइसकेका राजनीतिज्ञ हुन् ।
प्रदेश २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, वाम गठबन्धन र मधेसी गठबन्धनबाट ९५ जनाले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश २ मा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला छन् ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका पूर्वसांसद उम्मेदवारमा सिरहा १ मा प्रदीप गिरी, सिरहा २ मा रामचन्द्र यादव, धनुषा १ मा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, धनुषा २ मा रामकृष्ण यादव, धनुषा ३ मा विमलेन्द्र निधि, धनुषा ४ मा महेन्द्र यादव, महोत्तरी १ मा सीताराम भण्डारी, महोत्तरी २ मा किरण यादव, महोत्तरी ४ मा महेन्द्रकुमार राय, सर्लाही १ मा शम्भुलाल श्रेष्ठ, सर्लाही २ मा जंगीलाल राय, सर्लाही ४ मा अमरेशकुमार सिंह, रौतहट १ मा कृष्णप्रसाद यादव, रौतहट २ मा मोहमद आफ्ताव आलम छन् । त्यस्तै, रौतहट ३ मा सुनिलकुमार यादव, बारा १ मा उमाकान्त चौधरी, बारा २ मा राधेचन्द्र यादव, बारा ३ मा फरमुल्लाह मन्सुर, पर्सा २ मा अजयकुमार चौरसिया र पर्सा ३ मा सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र पर्सा क्षेत्र ४ मा उम्मेदवारी दिएका रमेश रिजाल पनि पूर्वसांसद हुन् ।
वाम गठबन्धनबाट उमेदवारी दिएका पूर्वसांसदमा सप्तरी २ मा उमेश यादव, सप्तरी ३ मा ताराकान्त चौधरी, सिरहा २ मा सुरेशचन्द्र दास, सिरहा ४ मा अजयशंकर नायक, धनुषा १ मा मातृकाप्रसाद यादव, धनुषा २ मा रामचन्द्र झा, धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठ, महोत्तरी १ मा गिरिराजमणि पोखरेल, सर्लाही ४ मा शिवपुजन यादव, रौतहट १ मा सत्यनारायण भगत, रौतहट ३ मा प्रभु साह छन् । यसैगरी रौतहट ४ मा डा. वंशीधर मिश्र, बारा २ मा शिवचन्द्र कुशवाह, पर्सा १ मा विचारीप्रसाद यादव, पर्सा ३ मा राजकुमार गुप्ता, पर्सा ४ मा उम्मेदवारी दिने उर्मिला अर्याल पनि पूर्वसांसद् हुन् ।
मधेसी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वसांसदमा राजेन्द्र महतो (राजपा), शरद्सिंह भण्डारी (राजपा), महन्थ ठाकुर (राजपा), महेन्द्र यादव (राजपा), उपेन्द्र यादव (फोरम), मृगेन्द्रकुमार सिंह (राजपा), राजलाल यादव (फोरम), शत्रुघनसिंह कोइरी (फोरम), राजकिशोर यादव (राजपा), लक्ष्मणलाल कर्ण (राजपा) र अनिल झा (राजपा) छन् ।
]]> प्रहरीको सूचनापछि दाहाल झापाबाट हेलिकोप्टरमार्फत् काठमाडौं फर्किँदै http://www.nagariknews.com/news/30714/ Sun, 19 Nov 2017 08:14:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30714/ छोरा प्रकाश दाहाल गम्भीर बिरामी परेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झापाबाट काठमाडौं फर्किँदैछन्। प्रहरीले काठमाडौं फर्किने सूचना दिएपछि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न शनिबार विर्तामोड पुगेका दाहाल हेलिकोप्टरमार्फत् काठमाडौं फर्किँदैछन्।
विर्तामोड- छोरा प्रकाश दाहाल गम्भीर बिरामी परेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झापाबाट काठमाडौं फर्किँदैछन्। प्रहरीले काठमाडौं फर्किने सूचना दिएपछि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न शनिबार विर्तामोड पुगेका दाहाल हेलिकोप्टरमार्फत् काठमाडौं फर्किँदैछन्।
छोरा गम्भीर बिरामी परेको सूचना पाएलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बिहानै विर्तामोडमै दाहालसँग भेटघाट गरेका छन्।
यता चितवनमा रहेका रेणु दाहाल र अन्य पारिवारिक सदस्य पनि काठमाडौं आउँदैछन्।
]]> प्रकाश दाहाल नर्भिक अस्पतालमा भर्ना http://www.nagariknews.com/news/30712/ Sun, 19 Nov 2017 07:48:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30712/ काठमाडौं- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाल आकाश्मिकरुपमा अस्पताल भर्ना भएका छन्। हृदयघात भएपछि उनलाई आज बिहान साढे ५ बजे नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। उनलाई के भएको भन्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलाइएको छैन।
]]> गृहको सुरक्षा नीति : उम्मेदवारलाई प्राथमिकता http://www.nagariknews.com/news/30713/ Sun, 19 Nov 2017 07:43:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30713/ चुनावको मुखमा देशभर हिंसात्मक घटना बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाउने नीति बनाएको छ ।
]]> आततायी आक्रमण http://www.nagariknews.com/news/30711/ Sun, 19 Nov 2017 07:34:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30711/ रौतहट र भोजपुरमा शनिबार गराइएका बम विस्फोटका घटनामा ११ जना घाइते भएका छन् । रौतहटको चन्द्रपुरमा गराइएको विस्फोटमा एक बालकसहित ८ जना घाइते भएका हुन् । घाइतेमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ । यसैगरी भोजपुरमा गराइएको विस्फोटमा तीनजना घाइते भएका छन् ।
]]> मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई http://www.nagariknews.com/news/30710/ Sat, 18 Nov 2017 21:09:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30710/ यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत वर्षकी विजेता स्टेफेन डेल भेलीले उनलाई मिस वर्ल्डको ताज पहिराइन् । मिस वर्ल्डको उपाधी जित्ने मानुषी छैठौं मिस इन्डिया हुन् ।यसअघि सन् २००० मा अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले भारतको लागि मिस वर्ल्डको उपाधी जितेकी थिइन् ।
]]> धनगढी तताए हेमन्तले http://www.nagariknews.com/news/30709/ Sat, 18 Nov 2017 19:41:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30709/ डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन्। रुबस होटलमा दिउँसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा उनले गीत, गजल र कविता सुनाएर माहौल तताए।
धनगढी–डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन्। रुबस होटलमा दिउँसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा उनले गीत, गजल र कविता सुनाएर माहौल तताए।
साहित्यिक सृजनामा सधैं सिमान्तकृतहरुको आवाज मुखरित गर्दै आएका विवशले भगवानको खोजी शिर्षक कविताबाट वाचन शुभारम्भ गरे। उनले हली, बा दमाहा र ढोलक, देशको खोजी, कतारको रैबार, भुकम्प, कौशी र बाबा जस्ता मर्मस्पर्शी कविता सुनाए।
कार्यक्रममा कविहरु पदमराज जोशी, टोपेन्द्र शाह रसिक, अभि अजनवी र जनक रसिकले विवशका सृजनामा आञ्चलिक स्वाद पाइने भन्दै तारिफ गरेका थिए । कवितामा मानवीय पीडाका गहिराईभित्र आस्था अड्याउने ठाउँ खोज्दै हिँडेका छन् विवश । विवश साँस्कृतिक अध्येता पनि हुन् ।
उनका ‘विवशका स्रमाई, असौजको जून र यादै जनमभरि’ गरी तीन वटा गीति एल्बम, आफ्नै मनसँग र सैपालको आँगन कवितासँग्रह तथा कथा एउटै तिम्रो मेरो प्रकाशित छन् ।
]]> बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने ओली र दाहालको घोषणा http://www.nagariknews.com/news/30708/ Sat, 18 Nov 2017 19:23:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30708/ वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आउँदो दुई महिनाभित्र झापाको बी एण्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको हैसियतमा सम्बन्धन दिने घोषणा गरेका छन्। ‘चुनाव लगत्तै वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने र उक्त सरकारले सम्बन्धन दिने’ बचन दुवै नेताले दिएका हुन्।
]]> सक्रिय राजनीतिमै छु, राष्ट्रपतिमा मेरो रुची छैनः माधव कुमार नेपाल (अन्तर्वार्ता) http://www.nagariknews.com/news/30707/ Sat, 18 Nov 2017 17:40:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30707/ बाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएपछि नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकै उत्साहित देखिएका छन् । यसपटक काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं २ रोजेका नेता नेपाल निर्वाचन पछि सुविधाजनक बहुमतसहित बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् ।
]]> ४९ मतदाताको मतदान केन्द्र http://www.nagariknews.com/news/30706/ Sat, 18 Nov 2017 17:23:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30706/ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि ताप्लेजुङमा तोकिएका ११४ मतदान केन्द्रमा सबैभन्दा कम ४९ मतदाता रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी भने १ हजार ४० जना सम्म रहेका छन्।
ताप्लेजुङ- प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि ताप्लेजुङमा तोकिएका ११४ मतदान केन्द्रमा सबैभन्दा कम ४९ मतदाता रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी भने १ हजार ४० जना सम्म रहेका छन्।
उत्तरी दुर्गम गाउँ ग्याब्लामा रहेको मतदान केन्द्रमा ४९ जना मतदाता रहेको पाइएको छ। यो जिल्लाकै सबैभन्दा कम मतदाता रहेको मतदान केन्द्र हो । यसैगरी खोक्लिङको मोति मावि मतदान केन्द्रमा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी १ हजार ४० मतदाता रहेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ७३ मतदान स्थलमा तोकिएका ११४ मतदान केन्द्र मध्ये उत्तरी दुर्गम गाउँमा सबैभन्दा बढी २२२ मतदाता रहेका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको ओलाङचुङगोला मतदान केन्द्रमा रहेका यि मतदाता यहाँका दुर्गम गाउँमा भएका मतदान केन्द्र मध्येका सबैभन्दा बढी हुन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी महेशकुमार ठाकुरका अनुसार जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम गाउँ याङ्मामा ५७ जना मतदाता रहेका छन् । दुर्गम तर पर्यटकिय थल घुन्सामा भने १३१ मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरका अनुसार कालिखोलाको हरिसे निमावीमा १८४ तथा पापुङको किलिङमा १९४ मतदाता रहेका छन् । कालिखोला र पापुङको किलिङलाइ पनि दुर्गम क्षेत्रमै गणना गरिन्छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा पर्ने फुङलिङ नगरपालिकामा ९ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । १५ हजार १३७ मतदाता रहेको फुङलिङ पछि सिरीजङ्घा गाउँपालिकामा १० हजार २ सय ७१ मतदाता रहेका छन् । याङवरक गाउापालिकामा८ हजार ६०१ र सिदिङ्वा गाउँपालिकामा ७ हजार ६३३ मतदाता रहेका छन् । यि सबै निर्वाचन क्षेत्र नं १ मै पर्छन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा फुङलिङ नगरपालिका र याङवरक गाउँपालिकामा एमाले तथा सिदिङ्वा र सिरीजङ्घा गाउँपालिककामा काँग्रेसले जित हासिल गरेका थिए । उतिबेला नगरपालिका सहित याङवरक र सिदिङ्वा गाउँपालिकामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन लडेका थिए भने फुङलिङ र नगरपालिकामा एमाले एक्लै तथा सिदिङ्वामा संघीय लिम्बूवान संग मिलेर चुनाव लडेको थियो । माओवादी केन्द्रले फुङलिङ नपा र सिदिङ्वा गापामा उपप्रमुख पद जितेको थियो।
प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने साविकको लिङखिम गाविसलाइ गाभेर प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा ५ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ५ मध्ये ३ स्थानीय तहमा एमाले र २ स्थानीय तहमा काँग्रेस बिजय भएको थियो । प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ को सबैभन्दा कम मतदाता मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेका छन् । जहाँ ५ हजार ६७७ मतदाता रहेका छन् । मेरिङदेनमा ७ हजार ४८७,मैवाखोलामा ६ हजार ६२५,आठराइ त्रिबेणीमा ८ हजार ५३४ तथा फक्ताङलुङमा ७ हजार ९०९ मतदाता रहेका छन् । यि मध्ये मैवाखोलाका ३२ गाउँपालिका सदस्य मध्ये एमाले एक्लैले ३१ तथा काँग्रेसले एक स्थान जितेको थियो । आठराइ त्रिबेणीमा काँग्रेसले १३ मतान्तरले एमाले उम्मेदवारलाइ पराजित गर्दा माओवादी केन्द्र मैवाखोला र आठराइ त्रिबेणीमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेको मेरिङदेन गाउँपालिकाको प्रमुख पद काँग्रसले जित्दा ११५ मतान्तरले एमाले उम्मेदवार पराजित भएका थिए । मिक्वाखोलाको प्रमुख पद एमालेले जित्दा काँग्रेसले २५ मतको मात्र अन्तर व्यहोरेको थियो । राप्रपा संग मिलेर चुनाव लडेको काँग्रेस फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा एमाले संग पराजित भएको थियो।
]]> भोजपुरमा टाइम वम विस्फोट पछि दोहोरो भिडन्त, दुई प्रहरी घाइते http://www.nagariknews.com/news/30705/ Sat, 18 Nov 2017 16:37:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30705/ भोजपुरमा दोहोरो भिडन्त भएको छ। षडानन्द नगरपालिका १३ वोयाको भिरथाप्लो भन्ने ठाउँमा राखेको टाइम बम हटाउने क्रममा दोहोरो भिडन्त भएको हो। टाइमबम समेत पड्किएको छ। टाइम वमको छर्रा लागेर एक जना घाइते भएका छन्।
भोजपुर- भोजपुरमा दोहोरो भिडन्त भएको छ। षडानन्द नगरपालिका १३ वोयाको भिरथाप्लो भन्ने ठाउँमा राखेको टाइम बम हटाउने क्रममा दोहोरो भिडन्त भएको हो। टाइमबम समेत पड्किएको छ। टाइम वमको छर्रा लागेर एक जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा एमाले कार्यकर्ता विक्रम राई रहेका छन् । उनको अवस्था गम्भीर रहेको एमालेले जनाएको छ । टाइम वम हटाउने क्रममा पड्किएपछि दाहोरो भिडन्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इनिस्पेक्टर गित नारायण चौधरीले बताए। घटनामा दुइ जना प्रहरी समेत सामान्य घाइते भएका छन्। भिडन्तमा असई उमेस मेहेता र टेकनारायण चौधरी घाइते भएका छन्।
यस्तै वाम गठबन्धनको कार्यक्रम भइरहेको स्थानमा पनि वम पड्कीएको छ । साल्पा सिलोचो गाउँपालिका २ कुलुङ्गमा भैरहेको सभामा वम पड्किएको हो । सभामा नै वम पड्कीएपछि सभा तितर वितर भएको राजेश राईले जानकारि गराएका छन् । वम प्रहारबाट कुनै क्षति नभएको राईले बताए ।
]]> व्यवाहारिक ज्ञानले बुझ्न र सिक्न सजिलो http://www.nagariknews.com/news/30704/ Sat, 18 Nov 2017 16:22:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30704/ सधै कक्षाकोठामा किताब समाएर पढ्दा पढ्दा दिक्क बनेका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार भने छुटै अनुभव भयो । ललितपुरको हात्तिबनमा रहेको लिटिल एन्जल स्कुलमा शुक्रबार पुग्दा कक्षा ८ का विद्यार्थीहरु एक हलमा बसेर भारतिय रोवोटिक्स विज्ञहरुले रमाइलो गरि सिकाएको विषयबस्तुहरु निकै रुचिसाथ सिकिरहेको भेटिए । अन्य दिनको भन्दा शुक्रबार विद्यालयको महौलै छुटै थियो।
काठमाडौं – सधै कक्षाकोठामा किताब समाएर पढ्दा पढ्दा दिक्क बनेका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार भने छुटै अनुभव भयो । ललितपुरको हात्तिबनमा रहेको लिटिल एन्जल स्कुलमा शुक्रबार पुग्दा कक्षा ८ का विद्यार्थीहरु एक हलमा बसेर भारतिय रोवोटिक्स विज्ञहरुले रमाइलो गरि सिकाएको विषयबस्तुहरु निकै रुचिसाथ सिकिरहेको भेटिए । अन्य दिनको भन्दा शुक्रबार विद्यालयको महौलै छुटै थियो।
ब्रेनविभका भारतकालागि क्षेत्रिय निर्देशक मयंक गुप्ता र नेपालकालागि क्षेत्रिय निर्देशक रेनिस रौनियारले विद्यार्थीहरुलाई विश्व प्राविधिसँग जोड्न उनीहरुलाई रोवट बनाउन लगाए । करिब तीन सय भन्दा बढी हाराहारीमा उपस्थित रहेका विद्यार्थीहरुको समुहले आ–आफनो समुहनै बनाएर निर्देश रौनियार र गुप्ताले दिएको डिभाइसमा तार तथा अन्य मेसिहरु जोडेर रोबटनै बनाएर चलाए।
विद्यार्थीहरु आ–आफनो समुमा रोवट बनाएर चलाएपछि तालि बजाएर खुशिनै साटे। कक्षा ८ की निभा प्रधान र तनु रानाले सधै कक्षाकोठामा बसेर किताबी कुराहरु मात्र पढ्दा बाक्क लागेको अवस्थामा शुक्रबार साथीहरुको समुहमा बसेर अन्तरक्रियात्मक कक्षामा उपस्थित हुन पाउँदा रमाइलो अनुभव भएको सुनाए।
‘रोवर्टबारे कक्षाकोठामा सरमिसहरुले किताबमा पढाउनु भएको थियो,’तनुले सुनाइन्‘तर रोवर्टमा कुन मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयबस्तुहरु मयंक सरले सिकाएपछि बल्ल बुझै ।’
निभा प्रधानले भने रोवर्ट अपरेट गर्न सिकेको बताइन् । ‘हामी मन्छे जस्तै रोवटमा पनि ब्रेन हुँदो रहेछ तर फरक यति हो कि रोवटलाई माइक्रो रिमोटले कन्ट्रोल गर्नू पर्छ ।’
जिया बल्लभले आफेले रोवटको ब्रेनको र मान्छेको ब्रेनको विच फरक बारे बुझेको जनाइन् । ‘सरहरुले निकै रमाइले र अभिनयात्मक तरिकाले कक्षामा सिकाउँदा निकै रोचक भयो हाम्रो कक्षा,’जियाले भनिन्‘रोवट बनाएरै सिक्दा किताबमा पढेको भन्दा छिटो बुझिन्दो रहेछ ।’
कक्षा ८ कै नवदित रेग्मीले रोवटमा विश्व ‘रोवट के हो कसरी काम गर्छ भन्ने विषयबस्तु शुक्रबारको विज्ञहरुको कक्षाबाट स्पष्ट बुझिएको बताए ।‘अझ सरहरुले हामीलाईलाइनै पहिले पावर प्वाइन्टबार बुझाएर लेखाएर अनि पछि फेरि रोवटका मेसिहरु दिएर बनाउन लगाउनु भयो,’नवदितले सुनाए‘आफैले रोवटको मेसिहरु फिट गर्दा कसरी काम गर्दो रहेछ जाने।’
एसियाका विद्यालयहरूमा विशेष गरी विद्यार्थीहरुलाई कक्षाकोठा भित्रनै सीमित राखिने गरेकोले गर्दा विद्यार्थीहरू विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको मयंकले बताए । उनले कक्षाकोठामा अन्वेषणपूर्ण धारणाको कमीले गर्दा विज्ञान ,प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितमा विद्यार्थीहरू निकै पछि परेको अनुभव सुनाए।
‘टेक्नोलोजीको दुनियामा हामी निकै पछाडि छौं,’मयंकले भने ‘यसमा अगाडि बढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराइनु आवश्यक छ।’
दिमागमा भएको सोचलाई थुपारेरमात्र होइन गरेर देखाउनकोलागि नानीहरूलाई ब्यवहारमा उतार्ने खालको शिक्षानै दिनु पर्ने नेपालका लागि क्षेत्रिय निर्देशक रेनिसले बताए।
लिटिल एन्जल स्कुलकी शिक्षिका इन्दु शर्माले हरेक स्कुलमा विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिने वर्कसपहरू हुनु पर्ने सुझाइन् । उनले यस्ता वर्क सपहरुले नानीहरुलाई रिफ्रेसमेन्ट गर्ने पनि बताइन् । ‘बच्चाहरुले कक्षामा किताबमा पढेका विषयबस्तुहरु आजको वर्कसपमा ब्यवहारमा उतार्न पाएका छन्’,समाजिक शिक्षाका शिक्षिका शर्माले भने‘किताबमा रोवर्टबारे विद्यार्थीले पढेकै भएपनि रोवट कसरी बन्छ,कासरी काम गर्छ र केके उपकरणहरु प्रयो हुनेबारे ब्यवहारिक रुपमा जान्न पाएर उत्साहित बनेका छन्।’ उनले विद्यार्थीहरुले नयाँ मान्छेहरुसँग सिक्न पाउँदा अन्तरक्रियात्मक हुने र उत्साहित समेत बनेको उनको अनुभव छ।
]]> बम विस्फोटमा बल्लबल्ल बाँचें: रामचन्द्र पौडेल http://www.nagariknews.com/news/30703/ Sat, 18 Nov 2017 16:18:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30703/ निर्वाचन विरोधी समूहको आक्रमणमा परेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले उम्मेदवारको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
]]> गगन थापाले मतदातालाई बुझाए विकासको फेहरिस्त, सडकमै पाँच अर्ब बजेट http://www.nagariknews.com/news/30702/ Sat, 18 Nov 2017 16:14:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30702/ कांग्रेस नेता गगन थापाले आफू सांसद भएर गरेका कामको फेहरिस्त आफ्ना मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। अघिल्लो पटक काठमाडौं क्षेत्र नं। ४ बाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थापाले चार वर्षे कार्यकालमा सम्पादन गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्।
]]> रामचन्द्र पौडेल सवार गाडीलाई लक्षित गर्दै बम विस्फोट http://www.nagariknews.com/news/30701/ Sat, 18 Nov 2017 16:10:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30701/ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सवार गाडीलाई लक्षित गर्दै तनहुँमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट गरिएको छ । विस्फोटमा परेर पौडेल चढेको गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको छ।
पोखरा- कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सवार गाडीलाई लक्षित गर्दै तनहुँमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट गरिएको छ । विस्फोटमा परेर पौडेल चढेको गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको छ।
पोखरास्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी बसन्त कुँवरका अनुसार तनहुँको भानु गाउँपालिका–९ नेपालडाँडामा सबा ३ बजेतिर प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको हो । ‘विस्फोटमा परेपनि पौडेल सकुशल हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पौडेललाई स्कर्टिङ गरिरहेको प्रहरीको गाडीमा सवार एकजना प्रहरीलाई सामान्य चोट लागेको छ । विस्तृत विरण आउन बाँकी छ।
]]> रौतहटमा बम विस्फोट, ८ घाइते http://www.nagariknews.com/news/30700/ Sat, 18 Nov 2017 16:07:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30700/ रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा बम विस्फोट हुँदा ८ जना घाइते भएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका ५ राधाकृष्ण मन्दिर नजिक भएको वाम गठबन्धनको वडा भेला स्थल नजिकै उक्त बम विस्फोट गराइएको हो।
काठमाडौँ – रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा बम विस्फोट हुँदा ८ जना घाइते भएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका ५ राधाकृष्ण मन्दिर नजिक भएको वाम गठबन्धनको वडा भेला स्थल नजिकै उक्त बम विस्फोट गराइएको हो।
विस्फोटमा परी घाइते हुनेमा लक्ष्मी राई, रत्न बहादुर विक, कुन्ता खत्री, गोपाल विक, दिलमाया राई र यमुना काफ्ले रहेका छन् भने चन्द्रपुर ५ की सरिता राई र उनका ६ वर्षीय छोरा जैविक राई गम्भीर घाइते भएका छन्।
जसमध्ये यमुना र गोपालको अवस्था सामान्य रहेको रौतहटका डिएसपी रामकुमार दानीले बताए । घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर पठाइएको छ।
]]> हङकङमा नेपाली सेनाका धावकलाई स्वर्णपदक http://www.nagariknews.com/news/30699/ Sat, 18 Nov 2017 15:12:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30699/ नेपाली सेनाका धावकले हङकङमा भएको ट्रेल रेसमा स्वर्णपदक जितेका छन्। साई कुङ देखी टियुन मुनसम्म भएको १ सय किलोमिटर रेसमा नेपाली सेनाका ४ जना अल्ट्रा धावकहरुले १२ घण्टा १ मिनेटको समयमा उक्त दुरी पार गरी स्वर्ण पदक जितेका हुन्।
काठमाडौं– नेपाली सेनाका धावकले हङकङमा भएको ट्रेल रेसमा स्वर्णपदक जितेका छन्। साई कुङ देखी टियुन मुनसम्म भएको १ सय किलोमिटर रेसमा नेपाली सेनाका ४ जना अल्ट्रा धावकहरुले १२ घण्टा १ मिनेटको समयमा उक्त दुरी पार गरी स्वर्ण पदक जितेका हुन्। सो प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबका जम. पूर्ण कुमार तामाङ सहित सुवेदार समिर तामाङ, जम.तिर्थ तामाङ र जम.वेद सुनुवारले उक्त उपाधी जितेका हुन्।
हङकङको निकै प्रख्यात मानिने उक्त रेसमा विभिन्न देशका ५००० धावकहरुको सहभागिता रहेको थियो।
]]> सहिदलाई सम्झेर भोट हाल्नुस् http://www.nagariknews.com/news/30698/ Sat, 18 Nov 2017 14:31:00 +0545 http://www.nagariknews.com/news/30698/ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनका सहिदहरुलाई सम्झेर भोट हाल्न आम जनतालाई अपिल गरेका छन। सहिदको सपना र बलिदानीलाई खेर जान नदिन मधेस गठबन्धन लाई जिताउन यस्तो अपिल गरेका हुन्।
सप्तरी (ढिकुली) - संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनका सहिदहरुलाई सम्झेर भोट हाल्न आम जनतालाई अपिल गरेका छन। सहिदको सपना र बलिदानीलाई खेर जान नदिन मधेस गठबन्धन लाई जिताउन यस्तो अपिल गरेका हुन्।
महदेवा गाउँपालिका वड़ा न. ६, ढिकुलीमा शनिबार फोरम नेपाल र राजपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले भोटको सही उपयोग गर्न मतदातालाई आग्रह गरे।
'भोट हाल्ने बेला छातीमा हात राखेर सहिदहरुलाई सम्झिनुस, अनि अन्तरात्माको आवाज सुनेर मधेस गठबन्धनलाई भोट हाल्नुस'- चुनाव प्रचारमा रहेका अध्यक्ष यादवले भने।
मधेसको शोषक तीन ठूला दल भएको टिप्पणी गर्दै यादवले चुनाव मधेस समर्थक र विरोधीबीचको लड़ाई भएको स्पष्ट परेका छन। 'यो सामान्य चुनाव होइन, मधेस आन्दोलनका पक्षधर र मधेसका विरोधी बीचको संघर्ष हो'- उनले भने।
सप्तरी क्षेत्र न. २ का प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार यादवले सप्तरीको विकास र समृद्धिको लागि आफ्नो जन्मभूमिबाट उम्मेदवार दिएको प्रष्ट पारे।
कार्यक्रममा राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शेखर यादव, फोरम नेपालको तर्फ बाट सप्तरी क्षेत्र न. २ को (ख) का उम्मेदवार शैलेन्द्र साह लगायतको उपस्थिति थियो।